ပြီးနောက်အရွယ်အစားကိစ္စများ - SEM စားသုံးမှုသည်လူတို့၏လိင်အင်္ဂါနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလေးစားမှုအပေါ်သြဇာသက်ရောက်ကြောင်းစမ်းသပ်မှုအထောက်အထား (၂၀၁၁၉) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်ရှိသည်။
Kaylee Skoda, Cory အယ်လ် Pedersen
SAGE ပွင့်လင်း, ဧပြီ-ဇွန်လ 2019: 1-11
ယခင်သုတေသနခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်ပုံရိပ်တွေအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအကြား, Self-လေးစားမှုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်အင်တာနက်မြင့်တက်မှုကြောင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအသုံးပြုနိုင်စွမ်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း (SEM) ၏ဖြန့်ဝေ၏လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူ, က SEM ၏စားသုံးသူသုတေသနမှာတွေ့ရှိသည်ဟုဆင်တူတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်လျှော့ Self-လေးစားမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါ postulated ထားပြီး ခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာပုံရိပ်မှထိတွေ့မှုပေါ်မှာ။ ဤသည်စမ်းသပ်ဆဲစုံစမ်းစစ်ဆေး SEM မှထိတွေ့မှုစားသုံးသူများနှင့်ဒီသက်ရောက်မှုကိုပင်မမီဒီယာမှထိတွေ့မှု၏တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်ဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိမရှိစူးစမ်း။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသင်တန်းသားများကိုကျပန်းမျှပုံရိပ်, ခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာပုံရိပ်, ဒါမှမဟုတ် SEM ပုံရိပ်အခြေအနေများဖို့တာဝန်နှင့်ယေဘုယျကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Self-လေးစားမှု၏အဆင့်ဆင့်အဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်-တိကျတဲ့နှင့်လိင်အင်္ဂါ-တိကျတဲ့ Self-လေးစားမှု၏အဆင့်ဆင့်သတင်းပို့ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ mean ရမှတ်စုစုပေါင်းအထီးမှဆွေမျိုးအမျိုးသမီးသင်တန်းသားများအဘို့သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့ကြပေမယ့် SEM ပုံရိပ်ထိတွေ့မှသာလူတို့တွင်ကိုယ်ခန္ဓာကို-တိကျတဲ့နှင့်လိင်အင်္ဂါ-တိကျတဲ့ Self-လေးစားမှုအပေါ်သိသိသာသာအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှား။ ဤအတွေ့ရှိချက်များ၏သက်ရောက်မှုများနှင့်ကန့်သတ်မှုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
keywords လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း, ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း, မီဒီယာ, Self-လေးစားမှု, ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်, မအင်္ဂါ
အင်တာနက်ကို၏အစဉ်အဆက်-တိုးမြှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းတုံ့ပြန်မှာညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းလျှင်မြန်စွာ (အနောက်ကမ္ဘာအတွက်အမြတ်အများဆုံးများထဲမှသို့တီထွင်ထားသည်Stewart & Szymanski, 2012) ။ စားသုံးမှုအွန်လိုင်းများအတွက်ရရှိနိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း (SEM) ၏သက်သက်အသံအတိုးအကျယ်ထိုကဲ့သို့သောစမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, နှင့် laptop (အဖြစ်အင်တာနက်သုံးစွဲနိုင်ပစ္စည်းတွေထဲမှာတိုးနှင့်အတူတစ်ပြိုင်နက်တည်းစိုက်ပျိုးထားပါတယ်Hare, Gahagan, Jackson, & Steenbeek, 2014; Mattebo, Larsson, Tydén, Olssen, & Häggström-Nordin, 2012; Owen, Behun, Manning, & Reid, 2012) ။ တစ်ဦး 2010 လေ့လာမှုမှာတော့ Ogas နှင့် Gaddam အဆိုပါ 1 သန်းအများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ဆုံးဖြတ်သည်, 42,337 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 4% အထိ equivalating, လိင်-related ခဲ့ကြသည်။ ဇူလိုင်လ 2009 မှဇူလိုင်လ 2010 ထံမှဝဘ်ရှာဖွေမှုတစ်ဦးကထပ်မံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိင်အကဲဆတ်သောအကြောင်းအရာ (တဝိုက်ဗဟိုပြုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 13% ထင်ရှားOgas & Gaddam, 2012) ။ နာမည်ကျော်က်ဘ်ဆိုက်ကနေစားသုံးမှုအချက်အလက်များ၏နှစ်ပတ်လည်လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူ "pornhub.com"ဤကိန်းဂဏန်းများမှာထငျရှားမြင့်တက်-The မှပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအတွက် 2018 Pornhub တစ်နှစ်တာဆက်လက် 33.5 တစ်မှုနှုန်းမှာတစ်နေ့လျှင်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ထက်ပို 100 လူဦးရေသန်းမှ equating (တစ်စက္ကန့်ရှာဖွေ, 962 ဘီလီယံကိုဧည့်သည်တစ်ဦးခမ်းနားစုစုပေါင်းအစီရင်ခံတင်ပြPornhub, 2018) ။ Pornhub အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ပေးမဆိုစက်ကိရိယာနှင့်အလွယ်တကူဖြစ်ကြောင်းထောင်ပေါင်းများစွာတို့တွင်တယောက်ကိုညစ်ညမ်း website မှာပေမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာနက်ကိုခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဖြင့် 2010 အတွက်၎င်း၏မြင့်တက်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားပေးထား SEM ၏ဖြန့်ဖြူးများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလတ်စားပေးပါသည်, United States ကို (ကိုမှန်မှန် 93% နေ့စဉ်သုံးစွဲခြင်းအစီရင်ခံအတူအင်တာနက် 12 နှင့် 17 နှစ်ပေါင်းနှစ်ကြားမြီးကောင်ပေါက်များ၏ 63% ကိုမြင်လျှင်Lenhart, Purcell, Smith, & Zickur, 2010) ။ 25 အတွက်လူငယ်ကသာ 2003% အွန်လိုင်း SEM (ထိတွေ့ခဲ့ပေမယ့်Mitchell, Finkelhor, & Wolak, 2003), 2008 အားဖြင့်ဒီနံပါတ်ကို (မိန်းကလေးများအဘို့အယောက်ျားလေးများနှင့် 93% များအတွက်% 62 မှစိုက်ပျိုးခဲ့သောSabina, Wolak, & Finkelhor, 2008) ။ ထို့အပွငျက (မိန်းကလေးများ 12 နှစ်ပေါင်းများ၏အသက်, ယောက်ျားလေးများ၏ 51% အားဖြင့်၎င်း, 32% ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ SEM အွန်လိုင်းအချို့ကိုပုံစံကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းLeahy, 2009) ။ အင်တာနက်ကိုတိုးဖို့အသုံးပြုနိုင်စွမ်းသကဲ့သို့, အရမ်းညစ်ညမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့်မရှိ။ 2018 အတွက် Pornhub စာရင်းဇယား (Pornhub ကြည့်ရှု၏ 71.6% ဝက်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ဖို့မိုဘိုင်း device ကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့ထင်ရှားPornhub, 2018), ဒီနေ့ရဲ့နည်းပညာကိုလွန်ခဲ့သောအစဉ်အဆက်မှယခင်ကမရရှိနိုင်ပါ SEM မှမည်မျှပင်တစ်ခုလွယ်ကူခြင်းကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းညွှန်ပြ။
SEM ရဲ့နေရာအနှံ့ရရှိနိုင်မှုနှင့်သုံးစွဲမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာပြဿနာ SEM ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုခန္ဓာကိုယ်နှင့်၎င်း၏အချိုးအစား (များ၏လက်တွေ့ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း postulation အပေါ်ဗဟိုပြုထားပါတယ်Lundin-Kvalem, Træen, Lewin, & Štulhofer, 2014; Mattebo et al ။ , 2012; Moran & Lee က, 2014) ။ တချို့ကသုတေသီများ (မိမိတို့၏ pubertal နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အဓိကအတွက် SEM ၏စားသုံးသူ, အထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်, အကျိုးဆက်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ "ပုံမှန်" ပါဝငျအရာကိုလက်တွေ့ schemas ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏အန္တရာယ်မှာဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြHald & Malamuth, 2008; ယုန် et al ။ , 2014; Ybarra & Mitchell က, 2005) ။ ဥပမာအားဖြင့်, ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာလေ့လာဆန်းစစ် (ခြုံငုံအရွယ်အစား၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထိပ်တန်းတတိယရာခိုင်နှုန်းအတွက်ပျမ်းမျှအထီးညစ်ညမ်းသရုပ်ဆောင်တွေအတွက်စိုက်ထူလိင်တံအရွယ်အစားတွေ့ပြီလီဗာ, ဖရက်ဒရစ်, & Peplau, 2006), ညစ်ညမ်းမင်းသမီးတစ်ဦးအချိုးအစားမမျှကြီးမားနံပါတ် (ယေဘုယျလူဦးရေမှဆွေမျိုး, ရင်သားကင်ဆာနှင့် / သို့မဟုတ်တင်ပါး implants ရှိသော်လည်းလီဗာ et al ။ , 2006; Moran & Lee က, 2014) ။ ထိုကဲ့သို့သောပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုဖြစ်နိုင်တဲ့လူ့အချိုးအစားနဲ့ဦးစားပေး၏ဘုံအပြင်ဘက်မဟုတ်ပေမယ့်, အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအပြောင်းအလဲ၏ပမာဏ (ပုံမှန်အားဖြင့် SEM အတွက်ပုံဖော်ထက်အများကြီးပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ပါသည်Lundin-Kvalem et al ။ , 2014; Mattebo et al ။ , 2012; Moran & Lee က, 2014).
မျှသာစမတ်ဖုန်းဝေးကိုကလစ်နှိပ်ပါအင်တာနက် access ကိုနှင့် SEM ဤသို့, သတ်မရှိလုပ်ပိုင်လက်လှမ်းနှင့်တကွ, စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်နှင့်အပေါ် Self-လေးစားမှုနှင့် SEM ကြောင့်ဆင်တူနေတဲ့ထုံးစံ၌စားသုံးသူသြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းရှိမရှိ SEM စားသုံးမှုအလားအလာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအဖြစ်ထုတ်လုပ်ပြီးပြီ မီဒီယာ၏ထိတွေ့ခြင်း nonsexually ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပုံစံများတွင်တွေ့မြင်။ ကြော်ငြာကနေမဂ္ဂဇင်းကြော်ငြာ, မီဒီယာအတွက်ပုံဖော်သုတေသနဆန်းစစ် Hyper-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအဆိုး Self-လေးစားမှု (သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့စောဒကတက်ခဲ့ကြHendrik, 2002; McCabe, ဘတ္, & Watt, 2007; Morrison, Ellis, Morrison, Bearden, & Harriman, 2004; Morrison, Harriman, Morrison, Bearden, & Ellis, 2006) ။ ထို့အပွငျ, မီဒီယာ-ထိတွေ့လေ့လာမှုများတသမတ်တည်း (ကြွက်သားစိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်ကျဆင်းခြင်းအပါအဝင်အုပ်စုများကိုထိန်းချုပ်ရန်ဆွေမျိုးထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေထိတွေ့သင်တန်းသားများအတွက်သိသာထင်ရှားသောတွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံတင်ပြAgliata, Tantleff-Dunn, 2004ခန္ဓာကိုယ်အဆီလျှော့ချရန်), တိုးမြှင့်ဖိအား (Miller & Halberstadt, 2005), နှင့်ခြုံငုံခန္ဓာကိုယ်ကျေနပ်မှုလျော့နည်းသွား (Guðnadóttir & Garðarsdóttir, 2014) ။ နှစ်ဦးစလုံးလိင်မီးမောင်းထိုးပြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြော်ငြာများအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးလာကြပြီပေးထားသော (Graff, Murnen, & Krause, 2013), စားသုံးသူများ၏ Self-လေးစားမှုအပေါ်ထိတွေ့မှု၏အလားအလာအနုတ်လက္ခဏာသြဇာလွှမ်းမိုးမှု, အရှင်တက်ကြွသုတေသန warranting ခိုင်လုံသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။
self-တန်ဖိုးထားသူတို့ကတန်ဖိုးထားသို့မဟုတ် devalued ထားတဲ့ရန်ဒီဂရီ (တစ်ဦးသည်လူတစ်ဦး၏အကဲဖြတ်ဖို့ကိုရည်ညွှန်းသည်Leary & Baumeister, 2000) ။ ဆောက်လုပ်ရေးတိုင်းတာရန်ခက်ခဲသည်, သုတေသီများတသမတ်တည်းဘယ်လို Self-လေးစားမှုအပေါ်သဘောတူရန်ရသေးရှိသည်အဖြစ်စစ်ဆင်ရေး (သတ်မှတ်ထားသောနှင့်အကဲဖြတ်နေသည်ဝစ်, 2005; Kuster & Orth, 2013; Trzesniewski, Donnellan, & ရော်ဘင်, 2013) ။ လောလောဆယ် Self-လေးစားမှုနှစ်ခုကွဲပြား domains များ-ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Self-လေးစားမှုနှင့်ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်ဒိုမိန်း-တိကျတဲ့) Self-လေးစားမှု (ကိုးကားနဲ့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဘရောင်း & မာရှယ်, 2006; Leary & Baumeister, 2000; Trzesniewski et al ။ , 2013) ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Self-လေးစားမှုကိုယ်ပိုင်အကြောင်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတန်ဖိုးကိုတရားသဖြင့်စီရင်ဆိုလိုသညျ။ ဒါဟာ (လူတွေခြုံငုံသူတို့ကိုယ်သူတို့အကြောင်းကိုခံစားရသည်လမ်းတစ်ဦးအကဲဖြတ်နှင့်တစ်သက်တာတစ်လျှောက်အတော်လေးတည်ငြိမ်Kuster & Orth, 2013; Leary & Baumeister, 2000; Trzesniewski et al ။ , 2013) ။ ဆနျ့ကငျြ, ပြည်နယ် Self-လေးစားမှုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဧရိယာသို့မဟုတ်အခြေအနေမှာတဦးတည်းရဲ့တန်ဖိုးစိစစ်ရေးပါဝငျသညျ။ ဒါဟာ (မိမိကိုယ်မိမိ၏အဓိပ္ပာယ် "ခြိမ်းခြောက်" အဲဒီဖြစ်ရပ်များမှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကြောင့်ထိခိုက်သည်ကိုပြောင်းလဲဘာသာရပ်ဖြစ်ကြောင်းမိမိကိုယ်မိမိ၏ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ခံစားချက်၏ရှုထောင့်ကိုရည်ညွှန်းသည်ဘရောင်း & မာရှယ်, 2006; Eisenberger, Inagaki, Muscatell, Haltom, & Leary, 2011) နှင့်မြင့်မားသောအခြားသူများဆွေမျိုးမိမိကိုယ်ကို၏ရိပ်မိလက်ခံမှုသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ခံရဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ် (Eisenberger et al ။ , 2011; Leary & Baumeister, 2000) ။ အဲဒီနှစျခု domains များဆက်ဆက် (ထပ်နိုင်ပေမယ့်ထို့ကြောင့် Self-လေးစားမှုဤနှစ်ခု domains များ, ထူးခြားသေချာပေါက်လဲလှယ်မဟုတ်ဘရောင်း & မာရှယ်, 2006) ။ ဥပမာအားဖြင့်, ပြည်နယ် Self-လေးစားမှုကိုထိခိုက်ကြောင်းအခွအေနေအချက်များကြောင့်အလားအလာထပ်တူအတွက်ရရှိလာတဲ့နောက်ထပ်ဝေးကနေဒါမှမဟုတ်ပိုပြီးတည်ငြိမ်, တသမတ်တည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Self-လေးစားမှုပြည်နယ်ဆီသို့ပိုမိုနီးကပ်အတက်အကျစေနိုင်ပါတယ်။
လူမှုနှိုင်းယှဉ်သီအိုရီ (Festinger, 1954) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းပိုကောင်းသူတို့ရဲ့လူမှုရေး positioning ကိုနှင့်မည်သို့သူတို့အခြားသူများဆက်စပ်နားလည်ရန်အားထုတ်မှုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမျိုးမျိုးရှုထောင့်အပေါ်အခြားသူများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြောင်းအားကောင်းမောင်းသန်, ပြည်နယ် Self-လေးစားမှုလူမှုရေးနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် Self-အမြင်အားမှတစ်ဆင့်ထိခိုက်စေနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုရှင်းပြထားသည်။ တခြားသူတွေရဲ့ရိပ်မိစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပျက်ကွက်ထို့နောက် (လျှော့ချပြည်နယ် Self-လေးစားမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်Lundin-Kvalem et al ။ , 2014; Morrison et al ။ , 2006; Morrison et al ။ , 2004) ။ လူမှုနှိုင်းယှဉ်သီအိုရီမီဒီယာပုံရိပ်များထိတွေ့ဥပမာ, ပြည်နယ် Self-လေးစားမှုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုရှင်းပြဖို့အဆိုတင်သွင်း။ စားသုံးသူနောက်ပိုင်းတွင်စံပြမီဒီယာကြော်ငြာများနှင့်ထိတွေ့သည့်အခါအထူးသ, ထိုသူတို့အလှတရားသို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာစံချိန်စံညွှန်းများပြသ-သူတို့ဆုံးသောဖြစ်ကြောင်းကောက်ချက်ချနှင့်လူမှုရေးငြင်းပယ်ခံရအံ့ဆဲဆဲကြောင်းကိုပါလိမ့်မယ်တွေ့ဆုံရန်ပျက်ကွက်ကြောင်းခံစားရသည်။ ရရှိလာတဲ့အကျိုးဆက် Self-လေးစားမှုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အနိမျ့ Self-လေးစားမှု (အထူးသဖြင့်လူငယ်များအကြား, ခြုံငုံခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုများအန္တရာယ်တိုးမြှင့်ဖို့ပြသထားသည်Orth, Robins, Widaman, & Conger, 2014; Paxton, Neumark-Sztainer, Hannan, & Eisenberg, 2006; Verplanken & Tangelder, 2011) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အနိမ့် Self-လေးစားမှု (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါတစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်နဲ့ဆက်စပ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှုတစ်ခုတိုးလာအားနည်းချက်များနှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိစ္စရပ်များနှင့်ချို့ယွင်းပညာသင်နှစ်သို့မဟုတ်အသက်မွေးမှုစွမ်းဆောင်ရည်အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အကြံပေးခြင်းများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစင်တာ, 2015) ။ နေရာအနှံ့အနိမ့် Self-လေးစားမှု, အရှင် (ကိုညှဉ်းဆဲသောသူတို့အားမြောက်မြားစွာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအန္တရာယ်များကိုဖြစ်စေOrth et al ။ , 2014; Paxton et al ။ , 2006; Verplanken & Tangelder, 2011), အရာအလှည့်အတွက်အလုံးစုံကျန်းမာရေး၏အရေးပါသောအတိုင်းအတာနှင့်သုတေသန၏အရေးပါသောဧရိယာဖော်ပြထားသည်။
ဒါဟာမီဒီယာထိတွေ့မှုစားသုံးသူအပေါ်ရှိစေခြင်းငှါချက်ချင်းသက်ရောက်မှုကိုကိုးကားတဲ့အခါမှာထိခိုက် Self-လေးစားမှုအမျိုးအစားကိုခွဲခြားဖို့, သို့သော်, အရေးကြီးပါသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Self-လေးစားမှုဆန်းစစ် longitudinal လေ့လာမှုများကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်အားလုံးလူမျိုးနှင့်လိင်များအတွက်သက်တမ်းတစ်လျှောက်အလားတူဖွံ့ဖြိုးကြောင်းတွေ့ပြီ: ဒါဟာ (ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက်အတော်လေးမြင့်မားသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်လျှောက်လုံးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်နှင့်အသက်ကြီးသို့ကျဆင်းနေမတိုင်မီလူကြီးသို့တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်Kuster & Orth, 2013; Robins & Trzesniwski, 2005; Trzesniewski et al ။ , 2013) ။ ဆနျ့ကငျြ, အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ရပ်များဖြစ်စေအပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောထုံးစံ၌ပြည်နယ် Self-လေးစားမှုကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, လေ့လာမှုတစ်ခုအားဖြင့်ကောက်ယူ Wong က et al ။ (2015) သူတို့ရဲ့တသက်တာမှာယခင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးကြောင်းကျပုံစံပုလ်အချိန်လေးအပေါ်သို့ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ရစေတယ်အထီးသင်တန်းသားများရှိခဲ့ပါတယ်။ အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်အုပ်စုသည်နောက်ဆုံးတွင်အထူးသတစ်ခု unprimed ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုဟာသူတို့ရဲ့ပုလ်ဆွေမျိုးနှင့် ပတ်သက်. ပြည်နယ် Self-လေးစားမှု၏အဆင့်မြင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အကြီးအကျယ်တစ်သက်တာတစ်လျှောက်လုံးတည်ငြိမ်ဖို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Self-လေးစားပေမယ့်ထို့ကြောင့်, ပြည်နယ် Self-လေးစားမှု၏ရှုထောငျ့ variable ကိုနှင့်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဘဝအတွေ့အကြုံများမှအားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ ကဲ့သို့သော, မီဒီယာထိတွေ့မှုအပါအဝင် SEM စားသုံးသူများ၏ Self-လေးစားမှုအပေါ်စားသုံးမှု-ရှိကြောင်းမဆိုအကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မယ် State-တိကျတဲ့ကမ္ဘာ့မဟုတ်ပါဘူး။ SEM မှထိတွေ့မှုအဆိုးပြည်နယ် Self-လေးစားမှုကိုထိခိုက်စေမဆိုစွန့်စားမှုဖြစ်စေလျှင်, ရှင်းလင်းစွာထပ်မံစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခံထိုက်ပေ၏။
SEM Exposure ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
ဒါဟာ (ထို့ကြောင့်ပေးအပ်သည့်လက်တွေ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားတုံ့ပြန်စားသုံးသူများ၏ပြည်နယ် Self-လေးစားမှုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရမည် Self-လေးစားမှုအပေါ်မီဒီယာကြော်ငြာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကဲ့သို့ SEM မှဝင်ရောက်ခွင့်များနှင့်ထိတွေ့မှုတိုးလာကြောင်း, ယနေ့မီဒီယာယဉ်ကျေးမှု၌ postulated ထားပြီးMontgomery-Graham, Kohut, Fisher, & Campbell, 2015; Morrison et al ။ , 2006; Morrison et al ။ , 2004) ။ SEM ၏လူကြိုက်များမီဒီယာလွှမ်းခြုံပုံမှန်အားဖြင့်လိင်စွဲလမ်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေးစိတျဝမျးကှဲ (တစ်အကြောင်းမရှိကြောင့်ကိုးကားပြီးအဖြစ်မူလကပင်အနုတ်လက္ခဏာက၎င်း၏စားသုံးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဘောင်ခတ်Lambert, Negash, Stillman, Olmstead, & Fincham, 2012အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်တရားမဝင်လိင်ကုန်သွယ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းမှ) နှင့်တစ်ဦးပံ့ပိုး (Montgomery-ဂရေဟမ် et al ။ , 2015) ။ ထိုနည်းတူစွာဤအစီရင်ခံစာများ SEM စားသုံးမှု (အစားကူးပြောင်းရေးကာလအပျက်သဘောအကျိုးဆက်များထက် State-တိကျတဲ့မိမိကိုယ်ကိုတစ်လက္ခဏာကြာရှည်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Self-လေးစားမှုတစ်ခုလက္ခဏာ) ရှိပါတယ်ကွောငျးစှဲတင်ဆက်ထားပါတယ်, Self-လေးစားမှု၏ကွဲပြား domains များခွဲခြားဖို့မလေ့ -esteem; Hare, Gahagan, Jackson, & Steenbeek, 2015; ပတေရုသ & Valkenburg, 2014) ။ သို့သော် SEM က၎င်း၏စားသုံးသူအပေါ်တစ်ဦးအခြေခံကျကျအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်သောယုံကြည်ချက်ဆန့်ကျင်, SEM ၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်လက်ရှိစာပေရောထွေးနေဆဲဖြစ်သည်။
တချို့ကသုတေသန (ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် SEM ၏ access ကိုဆန့်ကျင်နေသော်လည်း, SEM စားသုံးမှုအနည်းငယ်သာအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုဆိုတာကိုပြသHald & Malamuth, 2008; Luder et al ။ , 2011; Montgomery-ဂရေဟမ် et al ။ , 2015) ။ ဘာမှမဖြစ်လျှင်, SEM ထိတွေ့တစ်ဦးရှိသည်ကိုတွေ့ထားပြီ အပြုသဘောဆောင် အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေနဲ့လူရဲ့ဘဝအပေါ်သက်ရောက်မှု (Hald & Malamuth, 2008; ယုန် et al ။ , 2015) ။ ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက် SEM စားသုံးမှုဆန်းစစ်အများအပြားလေ့လာမှုများ (nonconsumers မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာ, ကျန်းမာသန်စွမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေး၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်ဘဝဆွေမျိုးတစ်ဦးခြုံငုံပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့အရည်အသွေးတိုးမြှင့်အစီရင်ခံခဲ့ကြHald & Malamuth, 2008; Hesse & Pedersen, 2017; Lundin-Kvalem et al ။ , 2014; ဆဗီးနား et al ။ , 2008) ။ ထို့အပြင်ကြောင့် SEM အင်တာနက်မှတဆင့်ဝင်ရောက်သောအမည်ဝှက်ဖို့စားသုံးသူများရရှိပါကလည်း (nonnormative လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများ, လိင်, ဒါမှမဟုတ်လမ်းကြောင်းမတူညီနှင့်အတူဝေါဟာရများမှလာမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုမြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများအတွက်အပြုသဘောအခန်းကဏ္ဍတွေ့ရှိထားသည်ယုန် et al ။ , 2015; Luder et al ။ , 2011).
စိတ်ဝင်စားစရာ SEM စားသုံးမှုအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုညွှန်းသုတေသနအထီးစားသုံးသူအတွက်မဟုတ်ဘဲအမျိုးသမီးစားသုံးသူမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေ့လာမှု ပေတရုနှင့် Valkenburg (2014) SEM ၏စားသုံးမှုအမျိုးသမီးစားသုံးသူအပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ရန်အနည်းငယ်သာရှိခဲ့ပေမယ့်ယောက်ျားအတွက်ခြုံငုံခန္ဓာကိုယ်ကျေနပ်မှုအတွက်လျော့နည်းမှုပြုခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရလဒ်သည်လည်းကလေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြ Cranney (2015), ကျသောအမျိုးသမီးစားသုံးသူ SEM စားသုံးမှုနှင့်အတူခန္ဓာကိုယ်ကျေနပ်မှုမရှိဆက်စပ်မှု (အထူးသ, ရင်သားအရွယ်အစား) သတင်းပေးပို့ပေမယ့်ယောက်ျားလိင်တံအရွယ်အစားကျေနပ်မှု၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကလေ့လာမှု Tylka (2014) SEM စားသုံးမှုအဆိုးကြွက်သားနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းအဖြစ်အပျက်သဘောယေဘုယျခန္ဓာကိုယ်လေးမွတျဆက်နွယ်နေကြောင်းခံရဖို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အထူးသလိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားဆန်းစစ်နောက်ထပ်လေ့လာမှုလည်းတိုးလာ SEM စားသုံးမှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကျေနပ်မှု (အကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုညွှန်ပြWhitfield, Rendina, Grov, & Parsons, 2017).
ထို့ကြောင့်စာပေပုံစံများပုံမှန်အားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု (ရန်အဓိကအားနည်းချက်အဖြစ်ကိုရိပ်မိခံအမျိုးသမီးများကိုရှိနေသော်လည်းသာအထီးစားသုံးသူ၏ကိုယ်ကိုလေးစားမှုအပေါ် SEM ထိတွေ့မှု၏ဆိုးကျိုးများကိုအကြံပြုEsnaola, Rodríguez, & Goñi, 2010; Graff et al ။ , 2013; Hatton & Trautner, 2011; Hendrik, 2002; Schneider et al ။ , 2013) ။ ဒီလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုထိတွေ့သက်ရောက်ထင်ဟပ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်; မိန်းမနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏကျနော်တို့က၎င်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှ desensitized ဖြစ်လာကြပါပြီအချိန်ဖြစ်ကောင်းတစ်အများကြီးပိုရှည်ကာလအတွင်း-နှင့်ယောက်ျားထက်မီဒီယာနှင့် SEM အတွက်အမြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ။
SEM မှထိတွေ့မှု (စားသုံးသူများ Self-လေးစားမှုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်သောရေပန်းစားလူ့အဖွဲ့အစည်းယုံကြည်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခုနှစ်တွင်Montgomery-ဂရေဟမ် et al ။ , 2015), ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက် SEM ထိတွေ့မှုအစဉ်အလာမီဒီယာကြော်ငြာထိတွေ့ခြင်းမှပြည်နယ် Self-လေးစားမှုဆွေမျိုးသြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်အဖြစ်ထပ်မံအမျိုးသမီးတွေ SEM စားသုံးမှုအဆိုးယောက်ျားအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, ဒါပေမယ့်မဖြစ်ခဲ့သည်။ တို့ကကောက်ယူဆက်စပ်လေ့လာမှုများအပေါ်အဆောက်အအုံ Morrison et al ။ (2004), Morrison et al ။ (2006)နှင့် ပေတရုနှင့် Valkenburg (2014)ကျနော်တို့ခန္ဓာကိုယ်-တိကျတဲ့ Self-လေးစားမှုနှင့်သင်တန်းသားများ၏လိင်အင်္ဂါ-တိကျတဲ့ Self-လေးစားမှုအပေါ်မီဒီယာကြော်ငြာထိတွေ့မှုနှင့် SEM ထိတွေ့မှုနှစ်ဦးစလုံး၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစူးစမ်း။ ယခင်သုတေသနအကြီးအကျယ် SEM စားသုံးမှု Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံအပေါ်မှီခိုသည်ဟုပေးသော, ဒီလေ့လာမှုသင်တန်းသားများကိုဆွေမျိုး, အထူးသတစ်ခုစမ်းသပ်တိုက်ရိုက်သင်တန်းသားများကိုယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့၏အလောင်းများကို၏အသွင်အပြင်နှင့် ပတ်သက်. ခံစားခဲ့ရပုံကိုကျေနပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဒီဇိုင်းနှင့်သူတို့၏မအင်္ဂါအသုံးချနိုင်ဖို့ပထမဦးဆုံးတို့တွင် မီဒီယာပုံရိပ်သို့မဟုတ်လုံးဝမပုံရိပ်ကိုအခွအေနေတစ်ခုခုကိုထိတွေ့။
အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်း SEM စားသုံးမှု၏နံပါတ်အောက်တွင်ကောက်ယူယခင်သုတေသနအပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့တော်တော်များများယူဆချက်အဆိုပြုထား။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့ no-ပုံရိပ်ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေအထီးသင်တန်းသားများကိုပင်မမီဒီယာပုံရိပ်များထိတွေ့အထီးသင်တန်းသားများကိုထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေနှင့်သင်တန်းသားများကိုထက်နိမ့်အဆင့်ဆင့်သတင်းပို့အတူ State-တိကျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ယေဘုယျလိင်အင်္ဂါ Self-လေးစားမှု၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုသတင်းပို့မယ်လို့မျှော်လင့်ထား နိမ့်ဆုံးအဆင့်ကိုသတင်းပို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ။ ကျနော်တို့အမျိုးသမီးတွေယေဘုယျအားဖြင့်လူတို့အား Self-လေးစားမှုဆွေမျိုးများ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်သတင်းပို့ကြောင်းယခင်တွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပြီး, အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများကိုများအတွက်အလားတူလမ်းကြောင်းသစ်တွေးဆ, ဒါပေမယ့်လည်းအမျိုးသမီးမခွဲခြားဘဲအခြေအနေ, သူတို့ရဲ့အထီး counterparts တွေကိုမှယေဘုယျ Self-လေးစားမှုဆွေမျိုးများ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်သတင်းပို့မယ်လို့မျှော်လင့်ထား ခြုံငုံ (Esnaola et al ။ , 2010; Schneider et al ။ , 2013).
အဆိုပါလေ့လာမှုစစ်တမ်း software ကို Qualtrics သုံးပြီးအွန်လိုင်းကောက်ယူခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုအဓိကအားကြီးမားတဲ့အနောက်တိုင်းကနေဒါတက္ကသိုလ်ရဲ့သုတေသနပြုပါဝင်သူရေကူးကန်မှတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောတွစ်တာ, Facebook, Reddit အဖြစ်အွန်လိုင်းဝဘ်ဆိုဒ်များမှာလည်း snowball နမူနာနည်းလမ်းများမှတဆင့် nonstudents ၏စုဆောင်းမှုတို့အတွက်အသုံးချခဲ့ကြသည်။ နမူနာဖွဲ့စည်း 299 ပါဝင်သူ (n = 181 အမျိုးသမီး, n 118 ထံမှ 18 နှစ်ပေါင်းအထိအသက်အရွယ်နှင့်အတူ = 63 အထီး), (M = 25.22, SD = 7.79) ။ ကျား, မများကသင်တန်းသားများကို၏လူဦးရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ထဲမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် စားပွဲတင် 1.
စားပွဲတင် 1 ။ ကျားများကလူဦးရေအချိုးအစားလက်ခဏာများဖြန့်ဖြူး။
အမည်ခံစမ်းသပ်ဒီဇိုင်း randomized: ဒီလေ့လာမှု2×တစ်3(ပါဝင်သူကျား, မ) (အဘယ်သူအားမျှ, မီဒီယာ, SEM ပုံရိပ်ကိုထိတွေ့မှု) ပါဝင်ပတ်သက်။ ကျပန်းထိန်းချုပ်မှုခွအေနအေမှတာဝန်ပေးအပ်သင်တန်းသားများကိုမဆိုပုံရိပ်ထိတွေ့မခံခဲ့ရပါ။ ကျပန်းမီဒီယာခွအေနအေမှတာဝန်ပေးအပ်သင်တန်းသားများကိုပင်မမီဒီယာကြော်ငြာများကနေရှေးခယျြထား 20 ကျား-မျှမျှတတပုံရိပ်တွေရှုမြင်ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျပန်းအဆိုပါ SEM ခွအေနအေမှတာဝန်ပေးအပ်သင်တန်းသားများကို 20 အပြည့်အဝဝတ်လစ်စလစ်, ကျား, မ-မျှတသော, ညစ်ညမ်းသရုပ်ဆောင်ပရိုဖိုင်းပုံရိပ်တွေရှုမြင်ကြသည်။
ကျနော်တို့တော်တော်များများအကြောင်းပြချက်များအတွက်သုံးပုံရိပ်ကိုထိတွေ့မှုအခြေအနေများထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်တင်မြှောက်။ ပထမဦးစွာတစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်ခွအေနအေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်ပြည်နယ်တိကျတဲ့ Self-လေးစားမှု၏အခြေခံအဆင့်ကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကဤနှစ်ခုကိုစမ်းသပ်အခြေအနေများအကြားသတင်းပေးပို့ပြည်နယ် Self-လေးစားမှုတစ်ခုကွာခြားချက်ရှိပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိဆန်းစစ်ဖို့ SEM-နှစ်ခုကုသမှုအခြေအနေများ-မီဒီယာနှင့်ပါဝင်သည်။ မီဒီယာပုံရိပ်များထိတွေ့ဆန်းစစ်သုတေသနယေဘုယျအားဖြင့်အပျက်သဘောလွှမ်းမိုး Self-လေးစားမှုအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပေးထားသော (Agliata, Tantleff-Dunn, 2004; Guðnadóttir & Garðarsdóttir, 2014; McCabe et al ။ , 2007; Morrison et al ။ , 2006; Morrison et al ။ , 2004), ကျနော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဝတ်လစ်စလစ်-နှင့် SEM အတွက်ယေဘုယျလူဦးရေ-အကြောင်းအရာကလုံးဝကိုယ်စားမပြုသောခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာကြော်ငြာတွင်တွေ့မြင်မပြုလုပ် SEM ထိတွေ့မှု, အထူးသဖြင့်ပါဝင်သူ State-တိကျတဲ့ Self-လေးစားမှုကိုထိခိုက်လိမ့်မည်ဟုရှိမရှိစပ်စုခဲ့ကြသည်။
ခြောက်လမေးခွန်းများကိုအသက်အရွယ်, ကျားမ, လိင်, လူမျိုးရေး, ကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေ, နှင့်ပြီးစီးခဲ့ပညာရေး၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိအပါအဝင်တက်ရောက်လာသူများ၏အခြေခံလူဦးရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကိုမေးတယ်။
Rosenberg ကကိုယ်ပိုင်ချစ်ခင်လေးမြတ်စကေး (SES)
အဆိုပါ SES ((ဥပမာ "ငါအသှေးကောငျးတဲ့အရေအတွက်ရှိသည်ဟုခံစားရ") 10 ပစ္စည်းများပါဝင်သည်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Self-တန်ဖိုးရှိနှင့် Self-လက်ခံမှုတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Self-တန်ဖိုးထားအကဲဖြတ်ထားပါသည်Rosenberg က, 1965) ။ items 1 (ထံမှအထိတစ်ဦး Likert-type အမျိုးအစားစကေးသုံးပြီးရမှတ်တွေပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောမတူ) (4 မှပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောတူ) ။ ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Self-လေးစားမှုတစ်ခုပိုမြင့်ဒီဂရီရောင်ပြန်ဟပ်။ (ထိုစကေး၏တရားဝင်မှုယခင်သုတေသနအတွက်ထူထောင်ခဲ့ပြီးလက်ခံနိုင်ဖွယ် psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ .72 ထံမှ .88 အထိကိန်း Alpha အတူအစီရင်ခံခဲ့ကြGrey-Little, Williams, & Hancock, 1997; Robins, Hendin, & Trzesniewski, 2001) ။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာတော့α = .90 တစ်ဦးအားကြီးသောကိန်း alpha တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများမေးခွန်းလွှာ (BESAQ) စဉ်အတွင်းခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့ခြင်း
အဆိုပါ BESAQ အလားအလာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်တယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖော်ထုတ်အကြောင်းကိုမဆို Self-သတိသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ခံစားချက်တွေကိုအကဲဖြတ်ရန်ကြောင်း 28 ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့် BESAQ (ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်တဦးတည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုခံစားချက်တွေကိုနှင့် ပတ်သက်. နိုင်ငံပိုင်တိကျတဲ့ Self-လေးစားမှုအတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်တယ်Cash, Maikkula, & Yamamiya, 2004) ။ ဥပမာ, ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော "လိင်စဉ်အတွင်းငါသည်ငါ၏အဖော် unappealing ငါ၏အကောင်များ၏ရှုထောင့်ကိုတွေ့လိမ့်မည်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ " "ကျနော်တို့လိင်ဆက်ဆံနေတဲ့အခါ, ငါသည်ငါ၏အဖော်အကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာရွံရှာတွေ့လိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်ပူပန်" နှင့်တုံ့ပြန်ချက်တစ်ဦးအပေါ်ရမှတ်တွေအဖြစ်မေးခွန်းများကိုပါဝင်သည်5(ထံမှအထိတစ်ဦးချင်းစီကို item ရမှတ်များနှင့်အတူ 1-အမှတ် Likert-type အမျိုးအစားစကေး,ဘယ်တော့မှ) (5 မှအမြဲ) ။ အဆိုပါ BESAQ ဌာန၏ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များပိုမိုမြင့်မားခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုကိုကိုယ်စားပြုနေတဲ့အနုတ်လက္ခဏာစကေးဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များပိုမိုမြင့်မားကိုယ်ခန္ဓာကိုစိတ်ကျေနပ်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ, အပြုသဘောခန္ဓာကိုယ်-တိကျတဲ့ပြည်နယ် Self-လေးစားမှု) ညွှန်ပြနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်အခြားမှီခို variable တွေကိုနှင့်အတူဤအတိုင်းအတာကိုက်ညီအောင်နှင့်အနက်လွယ်ကူခြင်းအဘို့အရန်, BESAQ ပြောင်းပြန် coded ခဲ့သည်။ အဆိုပါ BESAQ အပေါ်ယခင်သုတေသန (.95 ထံမှ .96 အထိ Alpha အတူခိုင်မာတဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှုယုံကြည်စိတ်ချရညွှန်ပြငွေသား et al ။ , 2004) ။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာတော့α = .96 တစ်ဦးအလွန်အားကောင်းတဲ့ကိန်း alpha တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ GES တစ်ခုချင်းစီကိုကျားမ လိုက်. နှစ်ခုထူးခြားတဲ့ subscales, ပါဝင်ပါသည်: အဆိုပါ 12-ကို item အမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါလေးစားမှု subscale (FGES) နှင့် 14-item ကိုအထီးလိင်အင်္ဂါလေးစားမှု subscale (MGES; ဆောင်းရာသီ, 1989) ။ တစ်ခုချင်းစီကို subscale ယင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ခုချင်းစီမှတိကျတဲ့နှင့်အတူမအင်္ဂါ၏အသွင်အပြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုအကဲဖြတ်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် GES အထူးတဦးတည်းရဲ့အမအင်္ဂါ၏အသွင်အပြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုနှင့် ပတ်သက်. နိုင်ငံပိုင်တိကျတဲ့ Self-တန်ဖိုးထားအကဲဖြတ်ထားပါသည်။ အဆိုပါ FGES အပေါ်တဦးတည်းကသူတို့ labia minora ၏အရွယ်အစားနှင့်အတူသူတို့၏စိတ်ကျေနပ်မှုအကဲဖြတ်ဖို့သင်တန်းသားများကိုမေးတယ်သော်လည်းဥပမာ, MGES အပေါ်တဦးတည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းကို, သူတို့ရဲ့စိုက်ထူလိင်တံ၏အရွယ်အစားနှင့်အတူသူတို့၏စိတ်ကျေနပ်မှုအကဲဖြတ်ဖို့သင်တန်းသားများကိုမေးတယ်။ တုံ့ပြန်ချက်5(ထံမှအထိတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူတစ် 1-အမှတ် Likert-type အမျိုးအစားစကေးအပေါ်ရမှတ်တွေအလွန်မကျေနပ်) (5 မှအလွန်ကျေနပ်) ။ ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်တဦးတည်းရဲ့လိင်အင်္ဂါပုံပန်းသဏ္ဌာန် (ဆိုလိုသည်မှာ, အပြုသဘောလိင်အင်္ဂါ-တိကျတဲ့ပြည်နယ် Self-လေးစားမှု) နဲ့ပိုမိုမြင့်မားကျေနပ်မှုကိုထင်ဟပ်။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာတော့α = .91 ၏အားကြီးသောကိန်း alpha ဟာ FGES နှင့် MGES နှစ်ဦးစလုံးအတှကျမှီခဲ့ကြသည်။
40 ပုံရိပ်တွေစုစုပေါင်းကို Google search engine ကိုမှသည်နှင့်လူကြိုက်များညစ်ညမ်း website ကို Pornhub မှရရှိသောခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဆယ်ပုံရိပ်တွေမီဒီယာအခြေအနေအသုံးပြုခဲ့ကြသည်နှင့်အ 20 ပုံတွေကို SEM အခြေအနေအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်ဆဲအခြေအနေများနှစ်ဦးစလုံးမှာပုံရိပ်တွေကိုကျား, မမြှတ (10 အထီးနှင့်အ 10 အမျိုးသမီး) နှင့်လူအပေါင်းတို့ 40 ပုံရိပ်တွေတစ်ဦးတည်းသောမော်ဒယ်ပုံဖော်ခဲ့ကြသည်။ ထိန်းချုပ်မှုအခွအေနေအဘယ်သူမျှမပုံရိပ်တွေကိုပြသသည်။
Google ကနေတဆင့်ရရှိသောမီဒီယာပုံရိပ်များမဂ္ဂဇင်းများ, ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်တီဗွီကြော်ငြာထဲကနေစံကြော်ငြာလည်းပါဝင်သည်။ ပုံရိပ်တွေကသူတို့ရဲ့လိင်အယူခံဝင်ခြင်းနှင့်ခြုံငုံဆွဲဆောင်မှုအဘို့ကိုရှေးခယျြခဲ့ကြပေမယ့်အားလုံးမော်ဒယ်များအဝတ်ကိုဝတ်ခဲ့ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှတဆင့်ညစ်ညမ်းသရုပ်ဆောင် / မင်းသမီး profile များကိုအပေါ်ပြသသောသူတို့အားအထဲမှရှေးခယျြထားခဲ့ကြသည် pornhub.com။ ဤပုံများကို့ပညတ်ညစ်ညမ်းခန္ဓာကိုယ်စံနမူနာ (စသည်တို့ကိုကြီးမားသော penises, ကြီးမားသောရင်သား, hairless လိင်အင်္ဂါ,) သရုပ်ဖော်ထားတဲ့အတှကျရှေးခယျြခဲ့သညျဤပုံရိပ်တွေအားလုံးကိုသရုပ်ဆောင်များကိုလုံးဝဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ဂရပ်ဖစ်သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာမအင်္ဂါဟုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးပုံရိပ်တွေအထူးသ (18 နှင့် 30 နှစ်ပေါင်းနှစ်ကြား) သူတို့ရဲ့လူငယ်များအတွက်ရွေးချယ်ထားသည့်တစ်ကိုယ်တော်, ရှေ့ဆက်-Face full-ခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်ပုံတွေနှင့်သက်ဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်စံနမူနာအတွက်အမျိုးမျိုးသောတိုင်းရင်းသားနောက်ခံ (ကော့ကေးဆပ်, အာရှ, အာဖရိကအမေရိကန်) ၏သရုပ်ဆောင်များကိုကိုပုံဖျောဖို့ရှေးခယျြခဲ့သညျ: လူတို့သညျ၌လျောက်ပတ်, ကြွက်သားခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားများ, မိန်းမများအဘို့အကြီးမားတဲ့ hip-To-ခါးအချိုး။ အားလုံးပုံရိပ်တွေတစ်ခုချင်းစီကိုကျားမရဲ့ပုံစံ၏ Societe စံပြစံဖွဲ့စည်းကြောင်းအမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်နှစ်ခုပါတီသဘောတူညီချက်သေချာစေရန်လွတ်လပ်သည့်ဆန်းစစ်သုံးသပ်သူများက၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်၎င်းတို့စွမ်းရည်များအတွက်အကဲဖြတ်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, ရင်ပတ်၏အရွယ်အစား, areolas, vulvas, နှင့် SEM အခြေအနေနှင့်ပင်မမီဒီယာအခြေအနေအလုံးစုံလိင်အယူခံဝင်ခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုအတွက် penises စိုက်ထူ။
ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်လူဦးရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းမှသဘောတူခွင့်ပြုချက်ပြီးစီးပေါ်၌သင်တန်းသားများကိုကျပန်းသုံးအခြေအနေများတ Qualtrics ဆော့ဖျဝဲခြင်းဖြင့်တာဝန်ကျတယ်။ ထိန်းချုပ်ရေးအခွအေနေသင်တန်းသားများကိုမဆိုပုံရိပ်မှထိတွေ့မှုမရှိဘဲ, SES, BESAQ နှင့် FGES / MGES ၏နိုင်ရန်အတွက်သုံးမေးခွန်းမှချက်ချင်းတော့သည်။ မီဒီယာအခွအေနေသင်တန်းသားများ 20 ကျား-မျှမျှတတမီဒီယာကျပန်းအတွက် On-screen ကို5s အတွက်ပုံရိပ်တွေ-တင်ပြနိုင်ရန်-ထို့နောက်သုံးမှီခိုအစီအမံ (ထိန်းချုပ်မှုခွအေနအေသင်တန်းသားများအဖြစ်ညီမျှနိုင်ရန်အတွက်) ဖြည့်စွက်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ SEM ခွအေနအေသင်တန်းသားများ 20 ကျား-မျှမျှတတ SEM ထိတွေ့ခဲ့သည်ပုံရိပ်တွေ-လည်းကျပန်းအတွက် On-screen ကို5s အတွက်တင်ပြနိုင်ရန်-, ပြီးတော့လည်းညီမျှနိုင်ရန်အတွက်မှီခိုအစီအမံ, ပြီးစီးခဲ့သည်။ လေ့လာမှုပြီးစီးပေါ်၌ရှိသမျှသောသင်တန်းသားများကို debriefed ခဲ့ကြသည်နှင့်၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Self-လေးစားမှုစမ်းသပ်အခြေအနေများ (ထိတွေ့မှုနှင့်အတူကွဲပြားမည်ဟုမျှော်လင့်မတည်ငြိမ်ရိုကြောင်းပေးထားKuster & Orth, 2013; Trzesniewski et al ။ , 2013) (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်ပြည်နယ်တိကျတဲ့ Self-လေးစားမှုရမှတ်ပါဝင်သူအကြား multicollinearity အထောက်အထားကတညျးစားပွဲတင် 4) -global Self-လေးစားမှုအားလုံးသက်ဆိုင်သောဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်ထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်။ factorial ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်, ကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှုကို (မှီခို variable ကိုအပေါ်တစ်ဦး Bonferroni ဆုံးမခြင်းနှင့်အတူအသီးအသီးအချက်တစ်ခု univariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်ဖျော်ဖြေမှု, 2013; Tabachnick & Fidell, 2019) ။ တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း, Normal, နှင့်အကြွင်းအကျန်များ၏လွတ်လပ်ရေး၏ယူဆချက်အားလုံးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးခဲ့ကြသည်။
covariance ၏ Two-လမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြုံငုံခန္ဓာကိုယ်ကျေနပ်မှု၏မှီခို variable ကိုအပေါ်အခြေအနေနှင့်ကျား, မသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့ကောက်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါလိင်အင်္ဂါလေးစားမှုစကေးကြောင့်တိတစ်ခုချင်းစီစကေးအပေါ်အခြားကျားမအဘို့ပျောက်ဆုံးဒေတာကိုဆပ်လို့သူ့ရဲ့ကျားမတိကျတဲ့, ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတွင်ထည့်သွင်းမခံခဲ့ရပါဘူး။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Self-လေးစားမှုများအတွက်ချိန်ညှိပြီးနောက်, ကျား, မတစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှားခဲ့ပါတယ်, F(1, 293) = 50.75, p <.001, p2p
။ အခြေအနေသိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုလည်းရှိခဲ့သည်, F(2, 293) = 2.60, p <.05, p2p နှင့်အခြေအနေအပြန်အလှန်အားဖြင့်သိသိသာသာကျားမ, F(2, 293) = 4.21, p <.05, p2p
။ ဒီအမြင့်မားတဲ့အမိန့်သက်ရောက်မှုခန္ဓာကိုယ်ကျေနပ်မှုအပေါ် SEM ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအမျိုးသမီးသည်ထက်အထီးသင်တန်းသားများကိုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောခဲ့တာညွှန်ပြ။ အမျိုးသမီးသူတို့ရဲ့အထီး counterparts တွေကိုမှခြုံငုံဆွေမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကျေနပ်မှုအတွက်အခြေအနေများဖြတ်ပြီးအောက်ပိုင်းရမှတ်အစီရင်ခံခဲ့သော်လည်း, ရိုးရှင်းသောသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုထင်ရှား လူတို့သညျအဘို့ကိုသာ အဆိုပါ SEM ထိတွေ့မှု၏အသီးအသီးအတွက်, F(1, 294) = 7.03, p <.01, မီဒီယာထိတွေ့မှု, F(1, 294) = 31.03, p <.001 နှင့်ထိတွေ့မှုအခြေအနေများမရှိပါ F(1, 294) = 22.62, p <.001 စားပွဲတင်2အခွအေနေသဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကျားမအဘို့ပြုပြင်နည်းလမ်းများနှင့်စံအမှားများကိုတွေ့ရမယ်။
စားပွဲတင်2။ ကျားနှင့်အခြေအနေအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကျေနပ်မှုရမှတ်။
covariance ၏သီးခြားတလမ်း univariate ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဟာကျားမ-တိကျတဲ့လိင်အင်္ဂါလေးစားမှုအကြေးခွံအဘို့အခွအေနအေသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Self-လေးစားမှုအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးနောက်အခြေအနေတစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသာ MGES အဘို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်, F(2, 115) = 2.81, p <.05, p2p
အဆိုပါ SEM ထိတွေ့မှုအခြေအနေယောက်ျား no-ပုံရိပ်နှင့်မီဒီယာပုံရိပ်အခြေအနေများလိင်အင်္ဂါလေးစားမှုဆွေမျိုးများ၏နိမ့်ဆုံးအဆင့်ကိုသတင်းပို့နှင့်အတူ (ကြည့်ရှု စားပွဲတင် 3).
စားပွဲတင်3။ Image ကို Exposure အခြေအနေအားဖြင့်လိင်အင်္ဂါချစ်ခင်လေးမြတ်ရမှတ်။
စားပွဲတင်4။ မှီခိုနှင့် Covariate Variables ကိုများထဲတွင် Correlate ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဖို့, ဒီကိုတိုက်ရိုက်မီဒီယာကြော်ငြာတစ်ခုစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းအတွက်နှစ်ဦးစလုံးလိင်အသုံးချဖို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် State-တိကျတဲ့ Self-လေးစားမှုအပေါ် SEM ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။ တွေးဆအမျှ SEM ထိတွေ့ယောက်ျားအားလုံးမှာမီဒီယာပုံရိပ်များသို့မဟုတ်လုံးဝမပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးသောသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျှင်သူတို့၏မအင်္ဂါ၏အသွင်အပြင်နှင့်အတူကစာရင်းအင်းသိသိသာသာလျှော့စိတ်ကျေနပ်မှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကို SEM ထိတွေ့လူမှုရေးနှိုင်းယှဉ်၏သီအိုရီမှယုံချေး, အထူးသ၎င်းတို့၏လိင်အင်္ဂါ၏အရွယ်အစားနှင့်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့အထီးစားသုံးသူများ၏ပြည်နယ် Self-လေးစားမှုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးအကြောင်း, ထို့နောက်အကြံပြုလုပ်ပါ။ ဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်ယခင်သုတေသနအကြီးအကျယ် Self-အစီရင်ခံစာအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ပြီး; ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းစနစ်အတိအလင်းဒေတာစုဆောင်းခြင်းစဉ်အတွင်း SEM မှသင်တန်းသားများကိုထိတွေ့။
အဆိုပါ SEM အခြေအနေအထီးသင်တန်းသားများကိုမီဒီယာနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေများ-နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာအခြေအနေသင်တန်းသားများကို no-ပုံရိပ်-ဖြစ်ခဲ့သည်ခွအေနအေမှဆွေမျိုးအောက်ပိုင်းရမှတ်သတင်းပို့မယ်လို့နှစ်ဦးစလုံးမှဆွေမျိုးနိမ့်ဆုံးပြည်နယ် Self-လေးစားမှုရမှတ်သတင်းပို့မယ်လို့ယူဆချက်ကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအစု ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ သာယောက်ျားခြုံငုံခန္ဓာကိုယ်ကျေနပ်မှု၏သိသိသာသာနိမ့်အဆင့်ဆင့်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့် SEM ထိတွေ့တုန့်ပြန်မအင်္ဂါပုံပန်းသဏ္ဌာန်စိတ်ကျေနပ်မှုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေးဆကျဘက်တွင်သို့သော်မိန်းမတို့အဘို့မတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ကြပေမဲ့အဲဒီရလဒ်တွေကို SEM ပုံရိပ်ထိတွေ့မှုအဆိုးသူတို့၏အလောင်းများကိုနှင့်ပြည်နယ်တိကျတဲ့အတွက်မအင်္ဂါ-အပြောင်းအလဲ၏ယောက်ျားရဲ့အမြင်ကိုထိခိုက် Self-လေးစားမှုနှင့်ယခင်သုတေသန (နှင့်ကိုက်ညီများမှာနိုင်သည်ကိုထပ်မံသက်သေအထောက်အထားပေးCranney, 2015; ပတေရုသ & Valkenburg, 2014) ။ အမှန်စင်စစ်အချို့သုတေသီများ (ကမဟုတ်ဘဲဗေဒအသွင်အပြင်ထက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် function ကိုပိုမိုအလေးပေးသောယောက်ျား၏ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကိုအမျိုးသမီးများ၏ကြောင်းကနေကွဲပြားကြောင်းအကြံပြုGrogan, 2008; Lundin-Kvalem et al ။ , 2014) ။ လိင်ကွဲ SEM-ရှိရာယောက်ျားသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်လကျအောကျခံနှင့် passive အမျိုးသမီးတစ်ဦး-တဆွေမျိုး "ဖျော်ဖြေ" ဖြစ်ပါတယ်များ၏အခြေအနေတွင်ယောက်ျားတခုတခုအပေါ်မှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဖို့လိင်အင်္ဂါ-တိကျတဲ့ Self-တန်ဖိုးထားမျှော်လင့်ထားပေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ယခင်သုတေသနသောပြည်နယ် Self-လေးစားမှုနှင့်ပုလ်အကြားဆက်ဆံရေးယောက်ျားသူတို့ကိုယ်သူတို့အတွက်အပျေါမှာရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ရစေတယ်ခဲ့ကြသည်ပို "ပုလ်" ဟုအဆိုပါစရိုက်များ, ပြည်နယ် Self-လေးစားမှု၏ သာ. ကြီးမြတ်သူတို့ရဲ့သတင်းပေးပို့အဆင့်ဆင့် (ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်Wong က et al ။ , 2015) ။ အဆိုပါလူကြိုက်များမီဒီယာအပါအဝင်လိင်ကရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရုပ်ရှင်များ, မဂ္ဂဇင်းများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ-မကြာခဏ (လိင်တံအရွယ်အစားနှင့်ပုလ်အကြားဆက်သွယ်မှုကိုအလေးပေးနှင့် "ပိုကြီး သာ. ကောင်း၏" သောမက်ဆေ့ခ်ျကိုအားဖြည့်လီဗာ et al ။ , 2006) ။ လူလိင်အင်္ဂါ-တိကျတဲ့ Self-လေးစားမှု SEM အတွက်တင်ပြပုံတွေကိုအားဖြင့်ခြိမ်းခြောက်သည်ဆိုပါကသူ၏ပုလ် built သောပေါ်မှာအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုကောင်းကောင်းမအင်္ဂါရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်နှင့်အတူချည်ထားကြောင်းညွှန်ပြ, အားနည်းချက်နှင့်အားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်-မှအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုဖြစ်စေခြင်းငှါ ခြုံငုံသူရဲ၏သဘောထားအမြင်။ အများဆုံးယောက်ျားဖွယ်ရှိ SEM တွင်ဖော်ပြပါရှိသည်အလောင်းတွေနဲ့ penises အချိုးအစားမညီမျှမှုနှင့် (atypically ကြီးမားသောဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်းHesse & Pedersen, 2017; လီဗာ et al ။ , 2006) ဤရလဒ်များကိုထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်မှပင်အကျဉ်းထိတွေ့ယောက်ျားနှစ်ဦးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့အလောင်းကောင်နှင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လိင်တံ၏အရွယ်အစားနှင့်အတူမကျေနပ်မှုခံစားရစေခြင်းအလိုငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အမျိုးသမီးတွေယောက်ျားမှ State-တိကျတဲ့ Self-လေးစားမှုဆွေမျိုးများ၏အနိမ့်ခြုံငုံရမှတ်သတင်းပို့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယအယူအဆမခွဲခြားဘဲထိတွေ့မှုအခြေအနေမှာလည်း (အမျိုးသမီးတွေအသက်ရှည်သမျှအဆင့်ကိုဖြတ်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်နှင့်လိင်အင်္ဂါစိတ်ကျေနပ်မှုသတင်းပို့ကြောင်းယခင်သုတေသန၏တွေ့ရှိချက်များကိုထောက်ပံ့, ထောက်ခံခဲ့သည်Esnaola et al ။ , 2010; Schneider et al ။ , 2013) ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြော်ငြာများမှပေမယ့်ထိတွေ့မှုနှစ်ဦးစလုံးလိင်အဘို့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုးလာသည်ဟုညွှန်ပြ, မိန်းမတို့အဘို့ထိတွေ့မှုအခြေအနေများကိုဖြတ်ပြီးပြည်နယ် Self-လေးစားမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုထုတ်ဖေါ်ဖို့သက်သေသာဓကများကရှင်းပြခဲ့စေခြင်းငှါတစ်ဦးစပ်စုတွေ့ရှိချက်ပျက်ကွက် (Graff et al ။ , 2013), က (အများဆုံးမကြာခဏလိင်မီဒီယာများ၏ပုံစံအားလုံးကိုအတွက် objectified ကြသူအမြိုးသမီးမြားဖြစ်ပါသည်Graff et al ။ , 2013; Hatton & Trautner, 2011) ။ အလွန်အမင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ထိတွေ့မှု, အမျိုးသမီး-အာရုံစူးစိုက်မီဒီယာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပြည်နယ် Self-လေးစားမှုအပေါ်အခွအေနေတဲ့ထူးခြားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်လည်းအမြားအဖြစ်လာသည်။ သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းအမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုများနှင့်လိင်အင်္ဂါ Self-လေးစားမှု၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရိုးရှင်းစွာနှစ်ရှည်လများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်၏မျှော်မှန်းအကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုက၎င်း၏ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲမဟုတ်ပါဘူး။ တဦးတည်းအဘို့, ဒေတာအွန်လိုင်း-တစ်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကို-နှင့်လိင်သုတေသနများအတွက်မှတ်သားစရာဖြစ်ကြောင်းခွအေနမြေား၏တစ်မူထူးခြားသော set ကိုတင်ဆက်ထားတဲ့ချဉ်းကပ်မှုနှစ်ခုစလုံးရှိကြောင်းနည်းစနစ်။ 2018 အတွက်ကောက်ယူလိင်သုတေသနအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစဉ်းစား၏ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ် (Shirmohammadi, Kohan, Shamsi-Gooshki, & Shahriari, 2018) စုဆောင်းခြင်းနှင့်သိုလှောင်မှုအထိခိုက်မခံအချက်အလက်များ၏, privacy နဲ့လျှို့ဝှက်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, ပါဝင်သူနှင့်သုတေသီနှစ်ဦးစလုံး၏အမည်ဝှက် (သဘောတူညီခကျြ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ထည့်သွင်းလျှင်) နှင့်အားနည်းချက်အပါအဝင်၏အလားအလာအပါအဝင်အွန်လိုင်းပုံစံများဖြင့်ကောက်ယူသုတေသနတချို့ထင်ရှားတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, ညွှန်ပြ သင်တန်းသားများကို။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်, သို့သော်, အွန်လိုင်းသုတေသနများ၏အပြုသဘောဆောင်အကျိုးခံစားခွင့်ကဤအချက်များထင်ရှားသော။ အစဉ်အလာရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်းရှင်းလင်းစေပါတယ်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းပလက်ဖောင်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, မကျြနှာကို-to-မျက်နှာဒေတာစုဆောင်းခြင်းအများပြည်သူ setting ကိုအတွက်အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်ဆွေးနွေးရန်လည်းမသက်မသာသင်တန်းသားများ၏စုဆောင်းမှုနိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းသုတေသနကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအဆိုပါအမည်မဖော်ကောက်ခံအချက်အလက်များ၏ဂရပ်ဖစ်များနှင့်လုံးလုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးသဘောသဘာဝစဉ်းစားဒီလေ့လာမှုအတွက်အရေးပါမှု, သင်တန်းသားများကိုအထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲတင်ထားဖို့ပိုပြီးဆန္ဒရှိဖြစ်နိုင်သည်ဘယ်မှာလုံခြုံပွင့်လင်းပတ်ဝန်းကျင်အားပေးထားသည်။
အွန်လိုင်းသုတေသနနှင့်တကွကြွလာသောအမည်မဖော်နေသော်လည်း, သို့သော်, လူ့လိင်သုတေသနများ၏ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောသဘောသဘာဝယေဘုယျ-အထူးသဖြင့်တဦးတည်းရဲ့အကြောင်းကိုအထိခိုက်မခံမေးခွန်းများကိုတောင်းသောအရာသေးသလူမှုရေးအရသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရနှစ်လိုဖွယ်တုံ့ပြန်မှု (လီဆယ်အချို့သင်တန်းသားများကိုဦးဆောင်ကြမအင်္ဂါ-စေခြင်းငှါTourangeau & Yan, 2007) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, စုဆောင်းမှုကြော်ငြာတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသင်တန်းသားများကို SEM နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးမြန်းမည်ဖြစ်ကြောင်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါဟာ (လူသားတစ်ဦးလိင်သုတေသနလေ့လာမှုမှာထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အဆင်ပြေခြင်းနှင့်မလုံလောက်ပါစိတ်ဝင်စားသင်တန်းသားများကိုလျော့နည်းရှေးရိုးစွဲသဘောထားတွေ, လျော့နည်းစျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ထို့ထက် ပို. ကွဲပြားခြားနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများအပါအဝင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့မရွေးချယ်သောသူတို့အထဲကနေအဖြစ်ထင်ရှားစွာကွဲပြားခြားနားသောလက္ခဏာများ, ရှိသည်ဖြစ်နိုင်Dunn et al ။ , 1997; Strassberg & Lowe, 1995) ။ လူဦးရေအားဤရလဒ်များကို generalizing တဲ့အခါစေတနာ့ဝန်ထမ်းဘက်လိုက်မှုပစ္စုပ္ပန်ခဲ့ကြပေမည်အဖြစ်ထို့ကြောင့်သတိ, ကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ SEM ထိတွေ့ State-တိကျတဲ့ Self-လေးစားမှုအပေါ်ရှိကြောင်းချက်ချင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကဲဖြတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထို့အပြင်ကျနော်တို့သင်တန်းသားများကို '' ယခင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး, ယာနျဘာသာတရားကို, ဒါမှမဟုတ် SEM စားသုံးမှုနှုန်းအကြောင်းကိုမေးလျှောက်ခြင်းငှါမရွေးယူကြ၏။ ဒါဟာ (ကြံ့ခိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်းနဲ့အတူသူများ, ဒီဘာသာရပ်အမှု၌စေ့စေ့စပ်စပ်ပညာရေး, သို့မဟုတ် SEM အကြောင်းအရာသူများလုံးဝချို့တဲ့ထိတွေ့မှုအဖြစ်အကြီးအကျယ်ဒီလေ့လာမှုမှာတင်ဆက်ပစ္စည်းကလွှမ်းမိုးမရစေခြင်းငှါအဆိုပြုပြီးပါပြီHald, 2006; Morrison et al ။ , 2006; Morrison et al ။ , 2004) ။ ကျနော်တို့စားသုံးသူ၏ပြည်နယ် Self-လေးစားမှုအပေါ် SEM တိုက်ရိုက်စားသုံးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသောကြောင့်, ကျနော်တို့အကြောင်းရင်းနှစ်ခုအဘို့မိမိတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး SEM စားသုံးမှုနှုန်းထုတ်ဖော်ရန်သင်တန်းသားများကိုမမေးခဲ့ချေ။ ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာ-based လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း SEM ၏စားသုံးမှု၏အသုံးပြုနိုင်စွမ်းနှင့်မြင့်မားသောနှုန်းထောက်ပံ့လုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားများ (ရှိယုန် et al ။ , 2014; Mattebo et al ။ , 2012; Owen et al ။ , 2012), ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသို့မဟုတ်မရှိမရှိသင်တန်းသားများကိုပြီးသား, အင်တာနက်ပေါ်မှာ SEM ထိတွေ့ခဲ့အကြံပြုခြင်း။ ဒုတိယအချက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်ဒီဇိုင်းပေးထားကျနော်တို့ SEM မှချက်ချင်းထိတွေ့ State-တိကျတဲ့ Self-လေးစားမှုအပေါ်တိုက်ရိုက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မယ်လို့ရှိမရှိအတွက်အဓိကအားဖြင့်စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ကမ-ရှိနေသော်လည်းကြောင့်ယခင် SEM စားသုံးမှုသမိုင်းအကြံပြုပုံရသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ကစားသုံးမှု-နှင့်မတိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှု-လွှမ်းမိုးမှုပြည်နယ် Self-လေးစားမှု၏ကြိမ်နှုန်းထို့ကြောင့်ကြောင့်အနာဂတ်သုတေသနအတွက်မှတ်ချက်တစ်ခု variable ကိုကြောင်းဆက်ဆက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အလားတူပင်သင်တန်းသားများကိုထိုကဲ့သို့သော၏သဘောသဘာဝနှင့်အခြေခံပေါ် မူတည်. အရာ-သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များအထူးသဖြင့် SEM ထိတွေ့မှုအခွအေနေမှ randomized သင်တန်းသားများအဘို့, ပါဝင်သူပြည်နယ် Self-လေးစားမှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဟုယုံကြည်ချက်-စခွေငျးငှါသတင်းပို့ဖို့တောင်းမခံခဲ့ရပါ။ ကျနော်တို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော် Self-Selection ကိုဘက်လိုက်မှုအဘယ်သူ၏စျယာနျဘာသာတရားကို SEM ကြည့်ရှုဆန့်ကျင်သင်တန်းသားများကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ကြောင်းငြင်းခုန်နိုင်ပေမယ့်, အနာဂတ်သုတေသီများမည်သို့ပင်ဆိုစေယုံကြည်ချက် SEM ထိတွေ့မှုနှင့် Self-လေးစားမှုနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဘယ်လိုဘာသာရေးဆနျးစစျသငျ့သညျ။
ထို့အပြင်ကြောင့် SEM ပုံစံအမျိုးမျိုးအတွက်လာမှတ်သားရပါမည်။ SEM အွန်လိုင်းဆည်းကပ်သောအခါ, က (ပုံ၏ပုံစံ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲတိုက်ရိုက်အရေးယူ format နဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်မဖြစ်Hald, 2006; Hald & Malamuth, 2008; Pornhub, 2018) ။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်, သို့သော်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်အခြေအနေများအတွက်အတိအကျနတ်ကတော်-အသုံးချဖို့နေဆဲပုံရိပ်တွေကိုထိန်းသိမ်းထား။ အနာဂတ်သုတေသီများထို့ကြောင့်ပိုကောင်းပုံမှန် SEM စားသုံးမှုအခြေအနေများတူအောင်ဖန်တီးရန်တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုထည့်သွင်းဖို့ရည်ရွယ်သင့်တယ်။
ဒီလေ့လာမှုကနေရလာဒ် SEM ၏စားသုံးမှုယောက်ျားတို့သည်မအင်္ဂါရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုပမာဏဘယ်လောက်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ကြပေမဲ့, ဒီလေ့လာမှု SEM ထိတွေ့မှုအဆိုး State-တိကျတဲ့ Self-လေးစားမှုအပေါ် SEM စားသုံးမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနေတဲ့လန်းလာသောနားလည်မှုဖို့ခြုံငုံခန္ဓာကိုယ်ကျေနပ်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အထီးသင်တန်းသားများကို-contributions ၏လိင်အင်္ဂါပြည်နယ် Self-လေးစားမှုကိုထိခိုက်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ SEM မှမဆို-ကြောင်းလွယ်ကူသောအသုံးပြုနိုင်စွမ်းခန္ဓာကိုယ်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်စားသုံးသူများ၏ခန္ဓာကိုယ်စံနမူနာ (အပေါ်ရှိပါတယ်လျှင်အကျိုးသက်ရောက်မှု-ကျနော်တို့သေး၏အပြည့်အဝသိမှမဖြစ်သကဲ့သို့ဤသည်သုတေသန, အနာဂတ်သုတေသနတည်ဆောက်ရန်အရာပေါ်မှာပလက်ဖောင်းကိုထောက်ပံ့ပေးရေလွှမ်းမိုးခြင်း, 2009) ။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ဤခေါင်းစဉ်အပေါ်မှာပိုပြီးသုတေသနတိုက်တွန်းပါသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုလည်းပြည်နယ် Self-လေးစားမှုအပေါ် SEM ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှု SEM ပြိုင်ဘက်တောင်းဆို-နှင့်အတူထက်အမျိုးသမီးများတွင်တွေ့ရှိခဲ့အလားတူသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုမျှမဖြစ်ကောင်းလျော့နည်းနေရာအနှံ့ကြောင်း, သို့သော်, အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ဒါဟာအထူးသဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအနောက်တိုင်းကျောင်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောလိင်ပညာရေး၏မရှိခြင်း, (လက်ရှိရှိကွောငျးလည်းသတိပြုသင့်ပါတယ်Stanger-Hall & Hall၊ ၂၀၁၁); ကသေးဖြစ်စေဘယ်လို Self-လေးစားမှုကိုမသိရခြင်းနှင့်လိင်-related မျှော်မှန်းချက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနေကြတယ်, လူငယ်တစ်ဦးသည်ပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များ (အဖြစ် SEM မှဖွင့်ဖို့ဆက်လက်သင့်တယ်ယုန် et al ။ , 2015; Luder et al ။ , 2011; ဆဗီးနား et al ။ , 2008) ။ မြီးကောင်ပေါက်, အထူးသဖြင့်ယောက်ျားလေးများဆန္ဒအလျောက် SEM မှမိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ထုတ်ပေးသောမှာငယ်ရွယ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်. ကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထားများကြောင့် (Leahy, 2009; ဆဗီးနား et al ။ , 2008), ဒါကြောင့်သူတို့ကမီဒီယာအပါအဝင်များ၌တွေ့မြင်ပုံရိပ်တွေ SEM-ဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကားသာမန်လူ့ခန္ဓာကိုယ်မူကွဲ၏သေးငယ်တဲ့ကိုယ်စားပြုမှုလျှင်လူငယ်များနှင့်ထွန်းသစ်စလူကြီးများနှံ့နှံ့စပ်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်မီဒီယာစာတတ်မြောက်ရေးပညာရေးကိုလက်ခံရရှိကြောင်းသမ္မာသတိရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်, ဒီလေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကိုအလေးအနက်ထားခံရဖို့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, SEM စားသုံးမှုအဆိုးအထီးစားသုံးသူဟာသူတို့ရဲ့မအင်္ဂါရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးခံစားရပုံကိုထိခိုက်စေ၏, သို့ဖြစ်လျှင်ဤနောက်ထပ်ဒီအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုလျော့ပါးစေရန်ကူညီပေးဖို့ဒီခေါင်းစဉ်သို့တစ်ဦးထက်ပိုကျယ်ပြန်ပညာရေးအားပေးလိုလျှင် သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အထွတ်အထိပ်အသက်အရွယ်စဉ်အတွင်း SEM ရယူသူကိုလူငယ်, (အကြားHald & Malamuth, 2008; ယုန် et al ။ , 2014; Leahy, 2009; Ybarra & Mitchell က, 2005) ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် SEM နဲ့လူ့ခန္ဓာကိုယ်၎င်း၏ variable ကိုပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုနှင့် ပတ်သက်. ကပိုကျယ်ပြန်ပညာရေးကိုလက်လှမ်းမီအတူ SEM မဆိုအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုပိုကောင်းကမကထပြုခဲ့စေခြင်းငှါနှင့်၎င်း၏အပြုသဘောသက်ရောက်မှုက၎င်း၏စားသုံးသူများကပိုပြီး fruitfully ခံစားနိုင်ပါသည်။
အနာဂတ်သုတေသနမြောက်မြားစွာနည်းလမ်းများတွင်ဤတွေ့ရှိချက်များတိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာအနာဂတ်သုတေသီများဟာသူတို့ရဲ့နမူနာများတွင်ဆယ်ကျော်သက်သင်တန်းသားများကိုပါဝင်သည်သငျ့သညျ။ SEM ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏လက်ရှိသုတေသီများဟာသူတို့ရဲ့ pubertal နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ယူဆရအရေးပါအသက်အရွယ်မှာထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများရယူသုံးကြသူလူငယ်အပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူပါဆုံးစိုးရိမ်နေကြသည်။ 18 နှစ်နှင့်အထက်အသက်လက်ရှိလေ့လာမှုသာအသုံးပြုသွားမည်သင်တန်းသားများ။ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း SEM အများဆုံးဗွီဒီယိုကနေတဆင့်လောင်လျက်ရှိ၏ အရှင်အနာဂတ်လေ့လာမှုများထိတွေ့သက်ရောက်မှုတိုင်းတာရန်ထားတဲ့အပျေါမှာတစ်ဦးထက်ပိုကိုယ်စားလှယ်အလတ်စားထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။ ထို့အပြင်, ဒီလေ့လာမှုပြည်နယ် Self-လေးစားမှုအပေါ် SEM တိုက်ရိုက်, ချက်ချင်းထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အနာဂတ်သုတေသီများထိတွေ့မှုတစျခု၏ပမာဏစုစုပေါင်းအစီရင်ခံဖော်ပြထားပြည်နယ် Self-လေးစားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုသို့မဟုတ် longitudinal သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံဒီဇိုင်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်စားသုံးရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်သူတို့ရဲ့ SEM စားသုံးမှုနှုန်းအစီရင်ခံရန်သင်တန်းသားများကိုလိုအပ်သင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အနာဂတ်သုတေသီများဟာသူတို့ရဲ့နည်းစနစ်-ကြောင်းကြိုတင်မှ State-တိကျတဲ့ Self-လေးစားမှုဆနျးစစျဖို့, ဖြစ်ပြီး SEM ထိတွေ့ခြင်းမှပိုကောင်း၎င်း၏စားသုံးမှုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစောငျ့ရှောကျအောကျပါသို့ pretest / posttest ဒီဇိုင်းများထည့်သွင်းဖို့လိုပေမည်။
အင်တာနက်ကိုယနေ့ခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှု၌အရေးပါသောတာ-အသုံးပြုသောကိရိယာတခုဖြစ်ဆက်လက်; SEM တစ်ခုများစွာသောဒီတော့အလွယ်တကူနှင့်အတူ, ဒီသတိလစ်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအလောင်းကောင်များ၏ပုံမှန်ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှု (အဖြစ်ကိုသူတို့စားသုံးပစ္စည်းအပေါ်မှီခိုရန်အားနည်းချက်အများအပြားတစ်ဦးချင်းစီဆပ်ခြင်းအလိုငှါကြီးထွားလာသောလူ့အဖွဲ့အစည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိHald, Kuyper, Adam, & Wit, 2013; ယုန် et al ။ , 2015; Luder et al ။ , 2011) ။ ဒီလေ့လာမှုကနေရလဒ်များသည်ဤစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းခိုင်လုံသော-သည်ယောက်ျား SEM ထိတွေ့ခံရခြင်းအပေါ်သို့ခန္ဓာကိုယ်ကျေနပ်မှုနှင့်မအင်္ဂါနှင့်စပ်လျဉ်းပြည်နယ် Self-လေးစားမှု၏သိသိသာသာလျှော့ချအဆင့်ဆင့်ကြုံတွေ့ကြသည်။ တှေ့ရှိ သို့သော် SEM မှထိတွေ့မှုကဒီလေ့လာမှုမှာအမျိုးသမီးသင်တန်းသားများကိုပြည်နယ် Self-လေးစားမှုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ တစ်ခုဖြစ်သည်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပြည်နယ် Self-လေးစားမှုအပေါ် SEM ထိတွေ့မှု၏ Societe ရိပ်မိအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု အကယ်. ပေမယ့်ကွေးမြား, ငါတို့မြင် (ယခင်သုတေသနအစီရင်ခံအဖြစ်အနာဂတ်သုတေသီများအခြားဖြစ်နိုင်သည်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကနေတည်ဆောက်နိုင်သည်ကိုမျှော်လင့်ပါတယ် Hald & Malamuth, 2008; ယုန် et al ။ , 2015; Luder et al ။ , 2011; Lundin-Kvalem et al ။ , 2014) သည်လက်ရှိတွင် SEM နှင့်အတူဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာအမည်းစက်တိုက်ဖျက်ရေး (Montgomery-ဂရေဟမ် et al ။ , 2015).
စာရေးသူ (s) ကိုဤဆောင်းပါး၏သုတေသန, ရေးသားခဲ့သောနှင့် / သို့မဟုတ်ထုတ်ဝေဖို့လေးစားမှုနှင့်အတူအကျိုးစီးပွားမျှအလားအလာပဋိပက္ခများကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။
စာရေးသူ (s) ကိုဤဆောင်းပါး၏သုတေသန, ရေးသားခဲ့သောနှင့် / သို့မဟုတ်ထုတ်ဝေရန်အဘယ်သူမျှမဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှုကိုရရှိခဲ့သည်။
Agliata, ဃ, Tantleff-Dunn, အက်စ် (2004) ။ အထီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကိုအပေါ်မီဒီယာထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှု။ လူမှုရေးနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 23, 7-22 ။ Doi:10.1521 / jscp.23.1.7.26988
Google Scholar | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
ဘရောင်း, JD, မာရှယ်, MA (2006) ။ Self-လေးစားမှု၏သုံးမျက်နှာများ။ Kernis ခုနှစ်, အမ် (Ed က။ ), ကိုယ်ပိုင်လေးစားမှု: ကိစ္စများနှင့်အဖြေကို (စစ 4-9 ။ ) ။ နယူးယောက်, NY: စိတ်ပညာနှိပ်ပါ။
ငွေသား, TF, Maikkula, CL, Yamamiya, Y. (2004) ။ အိပ်ခန်းထဲမှာခန္ဓာကိုယ် Baring: ကောလိပ်ကျောင်းအမျိုးသမီးများနှင့်လူတို့တွင်ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-schemas နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာ။ လူ့လိင်,7၏အီလက်ထရောနစ်ဂျာနယ်။ မှရယူရန် http://www.ejhs.org/volume7/bodyimage.html
အကြံပေးခြင်းများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစင်တာကို။ (2015) ။ self-လေးစားမှု။ မှရယူရန် http://cmhc.utexas.edu/selfesteem.html
Cranney, အက်စ် (2015) ။ တစ်ဦးဒတျချြနမူနာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကို။ လိင်ကျန်းမာရေးအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, 27, 316-323 ။ Doi:10.1080 / 19317611.2014.999967
Dunn, အမတ်, မာတင်, Ng, ဘေလီ, JM, Heath, AC, Bucholz, KK, က Madden, PAF, Statham, DJ သမား (1997) ။ တစ်ဦးလိင်စစ်တမ်းများတွင်ပါဝင်မှုဘက်လိုက်မှု: တုံ့ပြန် Non-ဖြေဆိုသူစိတ်ဓာတ်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများ။ ကူးစက်ရောဂါများ၏အင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, 26, 844-854 ။ Doi:10.1093 / ije / 26.4.844
Google Scholar | Medline | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
Eisenberger, Ni, Inagaki, TK, Muscatell, ka, Haltom, KB, Leary, MR (2011) ။ အဆိုပါအာရုံကြော sociometer: ပြည်နယ် Self-လေးစားမှုအခြေခံဦးနှောက်ယန္တရားများ။ သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ, 23, 3448-3455 ၏ဂျာနယ်။ Doi:10.1162 / jocn_a_00027
Esnaola, ဗြဲ, Rodriguez, အေ, Goñi, အေ (2010) ။ ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုများနှင့်ရိပ်မိ sociocultural ဖိအား: လိင်နှင့်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှု။ Salud စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, 33, 21-29 ။ မှရယူရန် http://www.medigraphic.com/pdfs/salmen/sam-2010/sam101c.pdf
Festinger, အယ်လ် (1954) ။ လူမှုရေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးကသီအိုရီ။ လူ့ဆက်ဆံရေး, 7, 117-140 ။ Doi:10.1177 / 001872675400700202
Google Scholar | SAGE ဂျာနယ်များ | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI
ဖျော်ဖြေမှု, အေ (2013) ။ SPSS (4th ed ။ ) သုံးပြီးစာရင်းဇယားကိုတွေ့ရှိခြင်း။ တထောင်သပိတ်, CA: Sage ။
ရေလွှမ်းမိုးခြင်း, အမ် (2009) ။ ကလေးများနှင့်လူငယ်များကြားတွင်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုများ၏ပျက်ဆီး။ ကလေးသူငယ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 18, 384-400 အလွဲသုံးစားပြုမှု။ Doi:10.1002 / car.1092
Graff, K. , Murnen, အက်စ်, Krause, အေ (2013) ။ low-ဖြတ်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်မြင့်မားသောဒေါက်ဖိနပ်: မိန်းကလေးများမဂ္ဂဇင်းပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုအတွက်အချိန်ကိုဖြတ်ပြီးတိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 69, 571-582 ။ Doi: 0.1007 / s11199013-0321-0
မီးခိုးရောင်-Little က, ခ, ဝီလျံ, VS, Hancock ဟာ, TD (1997) ။ အဆိုပါ Rosenberg ကကိုယ်ပိုင်ချစ်ခင်လေးမြတ်စကေးတစ်ခုကို item တုံ့ပြန်မှုသီအိုရီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာသတင်းလွှာ, 23, 443-451 ။ Doi:10.1177 / 0146167297235001
Grogan, အက်စ် (2008) ။ ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကို: ယောက်ျား, မိန်းမနှင့်ကလေးများအတွက်နားလည်မှုခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှု (2nd ed ။ ) ။ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့, အင်္ဂလန်: Routledge ။
Guðnadóttir, U. , Garðarsdóttir, RB (2014) ။ လုလင်တို့သည်နှင့်အမျိုးသမီး၏ခန္ဓာကိုယ်-မကျေနပ်မှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်-shaping အပြုအမူတွေအပေါ်ရုပနှင့်စံပြခန္ဓာကိုယ် International ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: စားသုံးသူယဉ်ကျေးမှုသက်ရောက်မှုမော်ဒယ်ပံ့ပိုးမှု။ စိတ်ပညာ၏စကင်ဒီနေးဂျာနယ်, 55, 151-159 ။ Doi:10.1111 / sjop.12101
Hald, GM က (2006) ။ ငယ်ရွယ်လိင်ကွဲဒိန်းမတ်လူကြီးများအကြားတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 35, 577-585 ။ Doi:10.1007/s10508-006-9064-0
Hald, GM က, Kuyper, အယ်လ်, အာဒံ, PC မှာ, ကျေး, JB- (2013) ။ လုပ်နေတာရှင်းပြကြည့်ရှုပါသလား? ဒတ်ခ်ျမြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများ၏ကြီးမားသောနမူနာများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအကြားအသင်းအဖွဲ့အကဲဖြတ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်, 10, 2986-2995 ။ Doi:10.1111 / jsm.12157.doi: 10.1111 / jsm.12157
Hald, GM က, Malamuth, မိုင် (2008) ။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု self-ရိပ်မိဆိုးကျိုးများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 37, 614-625 ။ Doi:10.1007/s10508-007-9212-1
ယုန်, K. , Gahagan, ဂျေ, ဂျက်ဆင်, အယ်လ်, Steenbeck, အေ (2015) ။ 'porn' ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသောအင်တာနက်ရုပ်ရှင်များကိုလူကြီးများအသုံးပြုခြင်းသည်ကနေဒါလိင်ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေးနည်းလမ်းများကိုမည်သို့ဖော်ပြနိုင်မည်နည်း။ ယဉ်ကျေးမှုကျန်းမာရေးနှင့်လိင် - သုတေသန၊ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်၊ ၁၇၊ ၂၆၉-၂၈၃ ။ Doi:10.1080 / 13691058.2014.919409
ယုန်, K. , Gahagan, ဂျေ, ဂျက်ဆန်, အယ်လ်, Steenbeek, အေ (2014) ။ '' ညစ်ညမ်း '' အပေါ်အမြင်များ: ဘက်စုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး '' ကနေဒါငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ရုပ်ရှင် Exploring ။ လူ့လိင်, 23 ၏ကနေဒါဂျာနယ်, 148-158 ။ Doi:10.3138 / cjhs.2732
Hatton, အီး, Trautner, အမ် (2011) ။ တန်းတူအခွင့်အလမ်း objectification? Rolling Stone အဖုံးတွင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမများလိင်မှုပြုခြင်း လိင် & ယဉ်ကျေးမှု, 15, 256-278 ။ Doi:10.1007 / s12119011-9093-2
Hendrik, အေ (2002) ။ ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်မှာအမျိုးသမီးအလောင်းကောင်များ၏ hegemonic ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှု၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ပါ: သီအိုရီများနှင့်အစီအစဉ်သုတေသနများအတွက်ခေါ်ဆိုခ။ မီဒီယာဆက်သွယ်ရေး, 19, 106-123 အတွက်အရေးပါလေ့လာရေး။ Doi:10.1080 / 07393180216550
Hesse, C တို့, Pedersen, CL (2017) ။ လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ကိစ္စနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာဗေဒ၊ လိင် & ယဉ်ကျေးမှု, 21, 754-775 ။ Doi:10.1007/s12119-017-9413-2
ဝစ်, JP (2005) ။ Self-လေးစားမှု၏လူမှုရေးဆောက်လုပ်ရေး။ Snyder ခုနှစ်, CR, လိုပက်ဇ်, SJ (Eds ။ ), အပြုသဘောစိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ် (စစ။ 135-148) ။ နယူးယောက်, NY: အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်နှိပ်ပါ။
Kuster, အက်ဖ်, Orth, U. (2013) ။ Self-လေးစားမှု၏ရေရှည်တည်ငြိမ်ရေး: ဒါဟာအချိန်-မှီခိုယိုယွင်းခြင်းနှင့် nonzero asymptote ပါပဲ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာသတင်းလွှာ, 39, 677-690 ။ Doi:10.1177 / 0146167213480189
လမ်းဘတ်, မိုင်, Negash, အက်စ်, Stillman, TF, Olmstead, SB, Fincham, FD (2012) ။ ကြာရှည်မထားဘူးသောချစ်ခြင်းမေတ္တာ: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်တဦးတည်းရဲ့ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်ဖို့အားပျော့ကတိကဝတ်။ လူမှုရေးနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 31, 410-438 ။ Doi:10.1521 / jscp.2012.31.4.410
Leahy, အမ် (2009) ။ porn တက္ကသိုလ်: ကောလိပ်ကျောင်းသားများကယ့်ကိုကျောင်းဝင်းအပေါ်လိင်အကြောင်းကိုပြောနေကြသည်ကဘာလဲ။ ချီကာဂို, IL: Northfield ။
Leary, MR, Baumeister, RF (2000) ။ Self-လေးစားမှု၏သဘောသဘာဝနှင့် function ကို: Sociometer သီအိုရီ။ စမ်းသပ်လူမှုစိတ်ပညာတိုးတက်လာ, 32, 1-62 ။ Doi:10.1016/S0065-2601(00)80003-9
Lenhart, အေ, Purcell, K. , Smith, အေ, Zickur, K. (2010) ။ လူမှုမီဒီယာနှင့်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ကိုဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်များကြားတွင်အသုံးပြုသည်။ Pewinternet: Pew Internet & American Life Project ။ မှရယူရန် https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED525056.pdf
လီဗာ, ဂျေ, ဖရက်ဒရစ်, DA, Peplau, LA က (2006) ။ အရွယ်အစားအရေးကြီးပါသလား သက်တမ်းတစ်လျှောက်လိင်တံအရွယ်အစားအပေါ်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အမြင်များ။ အမျိုးသားများနှင့် Masculinity ၏စိတ်ပညာ, 7, 129-143 ။ Doi:10.1037 / 1524-9220.7.3.129
Luder, MT, Pittet, ဗြဲ, Berchtold, အေ, Akré, C တို့, Michaud, PA, Surís, JC (2011) ။ မြီးကောင်ပေါက်အကြားအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားအသင်းအဖွဲ့များ: သွန်သင်ချက်အမှားသို့မဟုတ်အဖြစ်မှန်? လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 40, 1027-1035 ။ Doi:10.1007/s10508-010-9714-0
Lundin-Kvalem, ဗြဲ, Træen, ခ, Lewin, ခ, Štulhofer, အေ (2014) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, လိင်အင်္ဂါပုံပန်းသဏ္ဌာန်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ငယ်ရွယ်စကင်ဒီနေးလူကြီးများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-လေးစားမှု၏ self-ရိပ်မိဆိုးကျိုးများ။ Cyberpsychology, 8, 5-22 ။ Doi:10.5817 / CP2014-4-4
Mattebo, အမ်, Larsson, အမ်, Tydén, တီ, Olssen, တီ, Häggström-Nordin, အီး (2012) ။ Hercules နှင့် Barbie? ဆွီဒင်နိုင်ငံရှိဆယ်ကျော်သက်အုပ်စုများတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများနှင့်မီဒီယာနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ပျံ့နှံ့သွားခြင်းအပေါ်သြဇာညောင်းခြင်း။ သန္ဓေတားခြင်းနှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏ဥရောပဂျာနယ်, 17, 40-49 ။ Doi:10.3109 / 13625187.2011.617853
McCabe, အမတ်, ဘတ္, K. , Watt, C. (2007) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားခန္ဓာကိုယ်ဆီသို့သဘောထားများနှင့်သဘောထားအမြင်အပေါ်မီဒီယာလွှမ်းမိုးမှု။ အသုံးချ Biobehavioral သုတေသနဂျာနယ်, 12, 101-118 ။ Doi:10.1111 / j.1751-9861.2007.00016.x
Miller ကအီး, Halberstadt, ဂျေ (2005) ။ နယူးဇီလန်ယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်မီဒီယာစားသုံးမှု, ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်နှင့်ပါးလွှာသောစံနမူနာ။ စိတ်ပညာ၏နယူးဇီလန်ဂျာနယ်, 34, 189-195 ။ မှရယူရန် http://www.psychology.org.nz/wp-content/uploads/NZJP-Vol343-2005-7-Miller.pdf
Mitchell က KJ, Finkelhor, D. , Wolak, J. (2003) ။ အင်တာနက်ပေါ်မှလူငယ်များကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်း။ ကျူးကျော်, Maltreatment, & စိတ်ဒဏ်ရာ၏ဂျာနယ်, 8, 1-39 ။ Doi:10.1300/j146v08n01_01
Montgomery-ဂရေဟမ်, အက်စ်, Kohut, တီ, Fisher သည်ဒဗလျူ, ကမ့်ဘဲလ်, အယ်လ် (2015) ။ ဘယ်လိုသုတေသနနောက်ကွယ်မှကျန်ရစ်နေစဉ်လူကြိုက်များမီဒီယာညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတရားသဖြင့်စီရင်ဖို့စီးကျလာတယ်။ လူ့လိင်, 24 ၏ကနေဒါဂျာနယ်, 243-256 ။ Doi:10.3138 / cjhs.243-A4
Moran, C တို့, Lee က, C. (2014) ။ ပုံမှန်လား သာမန်လိင်အင်္ဂါများအပေါ်အမျိုးသမီးများ၏သဘောထားအမြင်ကိုလွှမ်းမိုးခြင်း - ပြုပြင်ထားသောနှင့်ပြုပြင်မထားသောပုံများနှင့်ထိတွေ့မှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုတစ်ခု။ BJOG: သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆိုင်ရာဂျာနယ်၊ ၁၂၁၊ ၇၆၁-၇၆၆ ။ Doi:10.1111 / 1471-0528.12578
Morrison, TG, အဲလစ်, SR, Morrison MA, Bearden, အေ, Harriman, RL (2006) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်လေးစားမှု, လိင်အင်္ဂါသဘောထားများနှင့်ကနေဒါယောက်ျားတစ်နမူနာအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးစားမှုအတွက်များပါတယ်။ အမျိုးသားများအတွက်ရဲ့လေ့လာရေးဂျာနယ်, 14, 209-222 ။ Doi:10.3149 / jms.1402.209
Google Scholar | SAGE ဂျာနယ်များ
Morrison, TG, Harriman, R. , Morrison MA, Bearden, အေ, အဲလစ်, SR (2004) ။ ကနေဒါ post-secondary ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှထိတွေ့မှု၏ဆက်စပ်မှု။ လူ့လိင်, 13 ၏ကနေဒါဂျာနယ်, 143-156 ။ မှရယူရန် https://www.researchgate.net/profile/Todd_Morrison/publication/257921700_Correlates_of_Exposure_to_Sexually_Explicit_Material_Among_Canadian_Post-Secondary_Students/links/5636fdef08ae75884114e53e.pdf
Ogas, O. , Gaddam, အက်စ် (2012) ။ တစ်ဦးကဘီလီယံကိုမတရားသောသူတို့အတှေး: အင်တာနက်ကိုလိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားသည်ကဘာလဲ။ နယူးယောက်, NY: ထွက်လာသည့်အပူရှိန်။
Orth, U. , Robin, RW, Widaman, KF, Conger, RD (2014) ။ အနိမ့် Self-လေးစားမှုစိတ်ကျရောဂါများအတွက်အန္တရာယ်အချက်ဖြစ်သနည်း မက္ကဆီကန်-မူလအစလူငယ်တစ်ဦး longitudinal လေ့လာမှုကနေတွေ့ရှိချက်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ, 50, 622-633 ။ Doi:10.1037 / a0033817
Owens, EW, Behun, RJ, Manning, JC, Reid, RC (၂၀၁၂) ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများ၏ဆယ်ကျော်သက်များအပေါ်သက်ရောက်မှု - သုတေသနကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ လိင်စွဲ & compulsivity, 2012, 19-99 ။ Doi:10.1080 / 10720162.2012.660431
Paxton, SJ, Neumark-Sztainer, ဃ, Hannan, PJ, Eisenberg, ME (2006) ။ ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှု Prospect ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများအတွက်စိတ်ကျရောဂါစိတ်ဓါတ်များနှင့်အနိမ့် Self-လေးစားမှုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ လက်တွေ့ကလေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်, 35, 539-549 ။ Doi:10.1207 / s15374424jccp3504_5
ပေတရု, ဂျေ, Valkenburg, ညနေ (2014) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ပစ္စည်းထိတွေ့ခြင်းခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုတိုးပွားစေသလား တစ်ဦးက longitudinal လေ့လာမှု။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာ, 36, 397-307 ။
Pornhub ။ (2018) ။ ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်တစ်နှစ်တာ။ မှရယူရန် https://www.pornhub.com/insights/2018-year-in-review
Robin, RW, Hendin, HM, Trzesniewski, KH (2001) ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Self-လေးစားမှုတိုင်းတာခြင်း: တစ် Single-item တခုကိုအတိုင်းအတာ၏အတညျပွုနှင့် Rosenberg ကကိုယ်ပိုင်ချစ်ခင်လေးမြတ်စကေးတည်ဆောက်ခြင်း။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာသတင်းလွှာ, 27, 151-161 ။ Doi:10.1177 / 0146167201272002
Robin, RW, Trzesniewski, KH (2005) ။ ယင်းသက်တမ်းကိုဖြတ်ပြီး self-လေးစားမှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ စိတ်ဓာတ်သိပ္ပံ, 14, 158-162 အတွက်လက်ရှိဦးတည်။ Doi:10.1111 / j.0963-7214.2005.00353.x
Rosenberg က, အမ် (1965) ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက် Self-image ကို။ Princeton, NJ: Princeton တက္ကသိုလ်နှိပ်ပါ။
Sabina, C တို့, Wolak, ဂျေ, Finkelhor, D. (2008) ။ လူငယ်များအတွက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သဘာဝနှင့်ဒိုင်းနမစ်။ Cyberpsychology & အပြုအမူ, 11, 691-693 ။ Doi:10.1089 / cpb.2007.0179
Schneider, အက်စ်, Weiss, အမ်, သီရဲလ်, အေ, Werner, အေ, Mayer, ဂျေ, Hoffman ဟာ, အိပ်ချ်, Diehl, K. (2013) ။ အမျိုးသမီးမြီးကောင်ပေါက်များတွင်ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှု: အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှု။ ကလေးအထူးကု, 172, 373-384 ၏ဥရောပဂျာနယ်။ Doi:10.1007 / s00431-012-1897-z
Shirmohammadi, အမ်, Kohan, အက်စ်, Shamsi-Gooshki, အီး, Shahriari, အမ် (2018) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးသုတေသနအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစဉ်းစားမြား: A ဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်။ သူနာပြုအီရန်ဂျာနယ်နှင့်သားဖွားသုတေသန 23, 157-166 ။ Doi:10.4103 / ijnmr.IJNMR_60_17
Stanger-ခန်းမ, KF, ခန်းမ, DW (2011) ။ Abstinence သာပညာရေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှုန်းထားများ: ငါတို့သည်အမေရိကန် PLoS ONE အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောလိင်ပညာရေးလိုအပ်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်6(10), e24658 ။ Doi:10.1371 / journal.pone.0024658
Stewart က, ဃ, Szymanski, ဃ (2012) ။ ၎င်းတို့၏ Self-လေးစားမှု, ဆက်ဆံရေးဟာအရည်အသွေး, နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုတစ်ခု Correlate အဖြစ်၎င်းတို့၏အထီးရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်ရဲ့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု Young ကအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတွေရဲ့အစီရင်ခံစာများ။ လိင်အခန်းကဏ္ဍ, 67, 257-271 ။ Doi:10.1007/s11199-012-0164-0
Strassberg, DS, Lowe, K. (1995) ။ လိင်သုတေသနအတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းဘက်လိုက်မှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 24, 369-382 ။ Doi:10.1007 / BF01541853
Tabachnick, BG, Fidell, LS (2019) ။ multivariate စာရင်းဇယားကိုအသုံးပြုခြင်း (7th ed ။ ) ။ Needham Heights, MA: Allyn & Bacon ။
Tourangeau, R. , ယန်, တီ (2007) ။ စစ်တမ်းများအတွက်အထိခိုက်မခံမေးခွန်းများကို။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ, 133, 859-883 ။ Doi:10.1037 / 0033-2909.133.5.859
Trzesniewski, KH, Donnellan, ကို MB, Robin, RW (2013) ။ Self-လေးစားမှု၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ Zeigler-Hill က၌, V. (Ed က။ ), ကိုယ်ပိုင်လေးစားမှု (စစ။ 60-79) ။ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့, အင်္ဂလန်: စိတ်ပညာနှိပ်ပါ။
Tylka, TL (2014) ။ ကြည့်မှန်ထဲမှာမှန်၊ အမျိုးသားများ၏ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများ၊ ကိုယ်ခန္ဓာပုံရိပ်နှင့်သုခချမ်းသာ။ အမျိုးသားများနှင့် Masculinity ၏စိတ်ပညာ, 16, 97-107 ။ Doi:10.1037 / a0035774
Verplanken, ခ, Tangelder, Y. (2011) ။ အဘယ်သူမျှမခန္ဓာကိုယ်ပြီးပြည့်စုံသော: ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှု, အစာစားခြင်းရောဂါ propensity, Self- လေးစားမှုနှင့် snacking များအတွက်အသွင်အပြင်နှင့်ပတ်သက်။ ပုံမှန်အနုတ်လက္ခဏာစဉ်းစားတွေးခေါ်၏အရေးပါမှုကို။ စိတ်ပညာ & ကျန်းမာရေး, 26, 685-701 ။ Doi:10.1080 / 08870441003763246
Whitfield, THF, Rendina, အိပ်ချ်, Grov, C တို့, Parsons, JT (2017) ။ , လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အမေရိကန်မော်ကွန်းကိုဖြတ်ပြီးလိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးလူတို့တွင် 47 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့များကိုကြည့်ရှုခြင်း, 1163-1172 ။ Doi: 10.1007 / s10508-017-1045-y က
ဆောင်းရာသီ, HC (1989) ။ လိင်တံအရွယ်အစားနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကို, လိင်အင်္ဂါပုံရိပ်, နှင့်အထီး (ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုရသေးသောပါရဂူစာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ်ထွန်းရေး၏အမြင်အကြားဆက်ဆံရေးတစ်ခုစာမေးပွဲ။ နယူးယောက်တက္ကသိုလ်, New York က။
Wong, YJ, Levant, RF, ဝလေ, MM, Zaitsoff, အေ, Garvin, အမ်, ဘုရင်, ဃ, Aguilar, အမ် (2015) ။ ပုလ် priming: Self-လေးစားမှုအပေါ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ပုလ်အတွေ့အကြုံများကိုသက်ဝင်၏ပေါ့ပေါ့အကျိုးသက်ရောက်မှုစမ်းသပ်စဉ်။ အမျိုးသားများအတွက်ရဲ့လေ့လာရေးဂျာနယ်, 23, 98-106 ။ Doi:10.1177 / 1060826514561989
Ybarra, ML, Mitchell က, KJ (2005) ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့ခြင်း - အမျိုးသားစစ်တမ်း။ Cyberpsychology & အပြုအမူ၊ ၈၊ ၄၇၃-၄၈၆ ။ Doi:10.1089 / cpb.2005.8.473